အချစ်ဦးအတွက် မနွမ်းသေးသည့် ပန်းလေးတပွင့် | CeleTrend
ကျမ လေ စိတ်ထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲ။ ဘာလည်းလို့မေးရင် လည်းမဖြေတတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် တမျိုးကြီး လို့ပြောတာပေါ့။ ဟိုလေ၊ ရင်ခုံတာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ၊ အဲဒါလည်းပါတယ်၊ စိုးရိမ်နေတာ၊ ကြောက်လန့်နေတာလည်းပါတယ်။ နှမြောနေတာ၊ နောက်၊ သနားသလိုဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်။ အဲဒါတွေ အကုန်ပေါင်းစုံနေတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ၊ တမျိုးကြီး ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့။ မိန်းခလေး တွေအတွက်ဆိုရင် ဘဝမှာ အပျို စဖြစ်တဲ့အချိန်ရယ်၊ ဘွဲ့ယူတဲ့ အချိန်ရယ်၊ လင်ယူတဲ့အချိန်ရယ်၊ တွေက ဘဝမှာ မှတ်တိုင်လို့ ပြောလို့ ရမယ် ဆိုရင်၊ မနက်ဖြန်က ကျမ အတွက် တတိယ မှတ်တိုင်လို့ ပြောလို့ ရမှာပေါ့နှော်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မနက်ဖြန်က ကျမရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ မို့လို့လေ။
ကျမ အရွယ်ကတော့ အိမ်ထောင်ပြုရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပါပြီလေ။ ကျမ အပျိုစဖြစ်တာက သူများတွေထက်စောတယ်လို့ ကျမဒေါ်လေးက တော့ ပြောခဲ့ဘူးတယ်၊ နောက် နှစ်ဆယ့်တနှစ်မှာ ရုက္ခဗေဒ အဓိကနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး၊ အခု အသက်နှစ်ဆယ့်လေးနှစ် အရွယ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ရတော့မယ်လေ။ ကျမရဲ့ သူတို့သားလောင်း ကတော့ ကိုညီညီလင်း တဲ့၊ သူက မင်္ဂလာဈေး မှာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးက သွင်းလာတဲ့ ဆေးတွေကို လက်ကားပြန်ဖြန့်တဲ့ အလုပ်နဲ့ စီးပွားရေးကောင်းနေတာလေ။ ကျမရဲ့ သူတို့သား လောင်း ဘယ်လိုဖြစ်လာသလည်း ဆိုတော့၊ နှစ်ဘက်သော မိဘတွေ သဘောတူ လို့ စုံဖက်ထိမ်းမြားပေးသည်လို့ပဲ ဆိုကြပါတော့ရှင်။ ဘယ်က နေဘယ်လို၊ အိမ်ထောင်ပြုဖို့အထိ ဖြစ်လာခဲ့တယ် ဆိုတာကတော့ ဇာတ်လမ်းက အရှည်ကြီးဆိုတော့ ကြုံရင်ကြုံသလို ရေးပြသွားမယ်နော်။
အခုလောလောဆယ်တော့ ကျမ စိတ်ထဲမှာ အများကြီး ဖြစ်နေတော့ ဘာကို တွေးလို့တွေးရမှန်းတောင် မသိသလိုဖြစ်နေရပါတယ်ရှင်။ အဓိက က မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ သူတို့သမီး အဖြစ် ဧည့်ခံရတော့ မယ်ဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့ ယူမဲ့သူက ဘယ်သူပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ ကိုယ်လှနေဖို့က အဓိက မဟုတ်လား၊ သူငယ်ချင်းတွေ အကြံပေးထားတဲ့ မိတ်ကပ်ပညာသည်တွေကို အချိန် ချိန်းထား၊ ဘာဝတ်စုံဝတ်မလဲ ဆိုတာကတော့ ရွေးထားတာ သုံးလလောက်ရှိပြီ စိတ်ကူးပြောင်းသွားလိုက် ပြန်သွားလဲလိုက်နဲ့ ဝတ်စုံငှားတဲ့သူ တွေကိုလည်း မျက်နှာတော့ နည်းနည်းပူသား၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမင်္ဂလာဝတ်စုံ နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေက တသက်လုံးပါသွားတော့မှာလေ။ နောက် တသက်လုံး ကိုယ့်အိမ်ဧည့်သည်လာရင် မင်္ဂလာဆောင် တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ အယ်လ်ဘန်ကြီး တွေထုတ်ထုတ်ပြ၊ နောက် အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကြာရင် အဲဒီပုံတွေ ဖေ့စ်ဘုပ်ပေါ်ပြန်တင်။ ခစ်ခစ်။ သူများတွေ လုပ်နေတာတွေ့လို့ လေ။
အင်း တကယ့်ကို စိတ်ထဲမှာ အဲဒါတွေနဲ့ ပဲ ပြည့်နေတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်မယ့် ကိုယ့်သူတို့သား၊ ကိုယ့်လင် ဖြစ်တော့မယ့်သူတောင် ကိုယ်နဲ့ ချစ်လို့ယူမဲ့သူမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ မေ့နေတယ်။ အဟစ်။ ဒါပေမဲ့ မင်္ဂလာအခန်းအနားမှာ တွဲထွက်ရတော့ ရင်ခုန်သားရှင့်။ သူနဲ့ တွဲပြီး မင်္ဂလာစင်မြင့်ကို လမ်းလျှောက်ရလို့တော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဧည့်ခံပွဲလာကြတဲ့သူတွေ ရှေ့မှာ ကိုယ့်ပုံက လှမှ လှပါ့မလား၊ ဟိုကောင်မတွေကလည်း တယ်လီဖုံးကင်မရာတွေနဲ့ ကလစ် ကလစ်နဲ့ ရိုက်နေလိုက်ကြတာ ငါ့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ နင်တို့ ဖေ့စ်ဘုပ်ပေါ်တင်လို့မရဘူးလို့ ပြောထားလိုက်ရ ကောင်းမလား၊ ခုမှတော့နောက်ကျနေပြီ စတာတွေ တွေးပြီး ရင်ခုံနေရတာလေ။ မင်္ဂလာ အခန်းအနားပြီးတော့ ပင်ပန်းလိုက်တာ ကိုယ်ကို ပုံပေးနေရလို့၊ တကိုယ်လုံးလည်း နွမ်း၊ လူတိုင်းကို ပြုံးပြနေရလို့ ပါးလည်းညှောင်း၊ ဒီကြားထည်း မပြီးသေးဘူး၊ အင်္ကျီအဝတ်အစား လဲ ပြီး သူ့ဖက်နဲ့ ကျမဖက်က အမျိုးအရင်းတွေခေါ်လို့ စားသောက်ဆိုင် ဒင်နာ သွားစားရအုန်းမယ်လေ။
ကျမ ဘက်ကတော့ အမျိုးသိပ်မရှိ ပါဘူး သူ့ဘက်က များတယ်ရှင့်။ စားကြသောက်ကြတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ က တိုက်တာနဲ့ သူ နည်းနည်းလေး ရစ်နေတာတွေ့ရတယ်၊ မျက်နှာလည်းနည်းနည်းနီနေပြီ။ အဲဒီတော့မှ ကျမလည်း တခြားဟာတွေးပြီး ရင်ခုန်လာရပြန်ပါတယ်၊ အော် ဒီလူနဲ့ ငါနဲ့ ဒီည အိပ်ယာတခုထဲ မှာ အိပ်ကြရတော့မှာနော်လို့။ ကျမ ရှေ့မှာချထားတဲ့ ဝိုင်အနီခွက်လေးကို ယူပြီး စုပ်သောက်လိုက်မိတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးမူးတော့လည်း ကောင်းတာပဲလို့၊ ဟွန်း။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ကိုယ့်ယောက်ျား ဖြစ်မဲ့သူနဲ့ ကစ်ဆင်းတောင် မစုပ်ရသေးပဲနဲ့ ညအတူအိပ်ရတော့မယ်ဆိုတာက တမျိုးကြီး လိုပဲ။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်ကို ပန်းလေး တပွင့်လို မထိရက်မကိုင်ရက်နဲ့လေ၊ နမ်းတာကလည်း ပါးကလေးကို သူ့နှာခေါင်းကြီးနဲ့ လာနမ်းဘူးပါတယ်။ ပြီးတော့ရှက်နေသေးတယ်။ ကျမက သူ့ကို ဆွဲပြီး နူတ်ခမ်းချင်း စုပ်လို့ ဘယ်ကောင်းမလည်း ၊သူက စရမဲ့ဟာ။ အင်း လေ ဒီည၊ ဘာတွေ ဖြစ်မလည်းဆိုတာ ကြည့်သေးတာပေါ့၊ လို့ပဲတွေးနေမိတော့တယ်။
ညဘက်ကျတော့ ကျမ တို့ လင်မယားအတွက် ဆိုပြီး ကိုကိုညီ ငှားထားတဲ့ တိုက်ခန်းလေး လေ။ သုံးလွှာမှာ လေ။ အဲဒါကို ကိုကိုညီ့ သူငယ်ချင်းကား နဲ့လိုက်ပို့ပေးပြီး ရောက်လာကြတာပေါ့။ ကိုကိုညီ့ အကို ရယ်၊ ကိုကိုညီ့ သူငယ်ချင်း ကားမောင်းပို့ပေးတဲ့သူရယ်၊ နောက်သူငယ်ချင်းတယောက်ရယ် ပါလာတယ်လေ။ သူ့ တွဲဘက်သူငယ်ချင်းတွေလို့ပြောတာပဲ၊ တယောက်က လူပျို ၊ ကားမောင်းတဲ့ တယောက်က အိမ်ထောင်နဲ့၊ ကိုကိုညီ့ ကို ရစ်ပြီး အိမ်ပေါ်ထပ်ထိတက်လိုက်လာကြတာ။ ကိုကိုညီ တို့ က ညီအကို နှစ်ယောက်ပဲ ရှိတာလေ၊ သူ့အကိုက အိမ်ထောင်နဲ့၊ မန္တလေးမှာ နေတာလေ။ တကယ်ကတော့ ကိုကိုညီ က မနေ့က အထိ သူ့မိဘ တွေနဲ့ အတူနေခဲ့တာလေ၊ သူက လူပျိုကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့ အသက်၃၀ ဆိုတော့။ ကျမထက် ခြောက်နှစ်ကြီးတယ်။ အဲဒါတခုတော့ ကျမ စိတ်ချမ်းသာရတယ်၊ သူက အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ ကျမတို့ လင်မယားသတ်သတ် နေကြမယ် ဆိုလို့လေ။
ကျမက မပြောရပဲ သူ့ဘာသာစီစဉ်တာ ကောင်းတာပေါ့။ ကျမ ကယောက်ခမတွေ နဲ့မနေချင်ပါဘူးရှင်၊ လွတ်လည်းမလွတ်လပ်ဘူး၊ နောက် ချွေးမ နဲ့ ယောက်ခမ ဆိုတာ ပုံပြင်ပေါင်းများစွာ ကြားဖူးနေတာ၊ ဝေးလေ ချစ်လေပဲမဟုတ်လား။ ခစ်ခစ်။ ဒါတောင်မှ အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးရှင့် သူတို့က ၅လွှာမှာနေတာ တတိုက်ထဲပဲ။ ကိုကိုညီ က အောက်က အခန်းလွှတ်သွားတာနဲ့ ဆွဲထားလိုက်တာ သူ့မိဘတွေနဲ့ သိပ်ဝေးဝေး မသွားနေချင်လို့။ သူ့မိဘ တွေကလည်း မင်္ဂလာဈေးမှာပဲ လေ ဆိုင်ခန်းရှိတော့။ အတူတူ သွားလို့ရတာပေါ့။ အဲဒါ အိမ်ပေါ်လည်းရောက်ရော သူတို့က အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ ဝိုင်းထိုင်ကြပြန်တယ်ရှင်။ ကိုကိုညီ့ အကို ကိုဘိုဘိုယူလာ တဲ့ အရက်ပုလင်းတလုံးနဲ့ပေါ့။ ကျမ ကတော့ ငြီးစီစီ ရှိလာတာနဲ့ သူတို့ကို ထားခဲ့ပြီး ရေချိုးဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ ကိုကိုညီ ငှားထားတဲ့ တိုက်ခန်းလေး ကအသစ်ကလေး ဆိုတော့ အထဲမှာ ကတော့ သပ်သပ်ယပ်ယပ်လေး ကြွေပြားကပ် ရေချိုးခန်းလေးထဲမှာ ရှာဝါ ရေပန်း ပါတတ်ထား တယ် ရေပန်းကလည်း လျှတ်စစ်နဲ့ အပူပေးတာလေး ရှိနေတော့ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ချိုးလိုက်တာ အိုး ဇိမ်ရှိလိုက်တာရှင်။ခေါင်းကို ဈေးကြီးပေးလုပ်ထားရတာ တရက်ပဲ ထားလိုက်ရလို့ နှမြောပေမဲ့၊ အခုလို ခေါင်းက ပါတခါထဲ လောင်းချိုးလိုက်ရတော့ လူကို လန်းဆန်းသွားတာပဲ။ အင်း၊ ရေချိုးခန်းလေးက လုံလုံခြုံခြုံ ဆိုတော့ ကျမ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ချိုးတာပေါ့။ခစ်ခစ်။
ဇိမ်ရှိလိုက်တာရှင်၊ တနေ့လုံးနွမ်းနေတာလေး ရေပူပူနဲ့ ချိုးချ ပြီး ဆပ်ပြာရည်မွှေးမွှေး နဲ့ တကိုယ်လုံးအမြုပ်ထအောင် တိုက်ချွတ်ချိုးလိုက်တာ လူလည်း လန်းဆန်းသွားတယ်။ ကျမ ရဲ့ ရွှေရင် အစုံကိုလည်း ပွတ်တိုက်ရင်း အင်း ငါ့ကိုယ်ခနွာကို လင်ဆိုတဲ့တစိမ်းယောက်ျား တယောက်။ ခိခိ ခုထိကတော့ တစိမ်းကိုး။ ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ကိုင်တော့မှာပါလား လို့ တွေးမိတယ်။ အဲဒီအတွေးလေးဝင်လာတာနဲ့ ကြက်သည်းလေး နည်းနည်းထသွားပြီး ကျမရဲ့ ချိုသီးထိပ်ကလေး တွေက မာလာတယ်။ ကျမ လက်ချောင်းလေး တွေနဲ့ ပွတ်ကြည့်လိုက်တော့၊ အို့၊ ကျမ ဒူးတွေတောင် မခိုင်တော့သလိုပဲ။ ကျမလက်ချောင်းတွေက ကျမပေါင်ခွဆုံလေးထဲရောက်သွားမိတယ်။ အဟိ။ ကျမ မထိရဲ ထိရဲ နဲ့ အသာလေး ပွတ်ကြည့်လိုက်တယ်။
မနေ့က မှ လောလော လတ်လတ် ရှင်းလင်းထားလို့ ချုံဘုတ်လေးက မရှိ တော့ဘူး။ ကလေးလေး ပါးလေးလိုပဲ ဖောင်းအိပြီး ချောမွတ်နေတယ်။ ဆပ်ပြာရည်တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်မှာပေါ့။ကျမ ဆက်မထိရဲတော့ဘူး။ ကိုယ်က ဆပ်ပြာရည်တွေကို ပဲ မြန်မြန်ကုန်အောင် ရေပန်းအောက်မှာ မျက်လုံးကိုမှိတ် မျက်နှာကို မော့ထားပြီး ဆက်ချိုးနေလိုက်မိတော့တယ်။ ဆပ်ပြာရည်စင်သွားမှ သဘက်တထည်နဲ့ ခေါင်းကို နည်းနည်းသုတ်ပြီး ခေါင်းမှာပတ်လိုက်တယ်။ နောက်တထည်နဲ့ ကိုယ်ကို ရင်လျှားပတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာလိုက်တယ်။ “ ဒုန်း” “ အား” “ ဟင် .ဆောရီး ဆောရီး ကိုအာဒမ် နာသွားလားဟင်” “အင်း ရပါတယ် မတော်တဆပဲဟာ” ကျမတို့ ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာနဲ့က ကပ်ရက်မဟုတ်လား။အဲဒါ ကျမက တံခါးကို တွန်းအဖွင့် အိမ်သာတခါးကို ဖွင့်နေတဲ့ ကိုအာဒမ့် တတောင်ဆစ်ကို တံခါးက သွားရိုက်မိတယ်လေ။ အသံကလည်း ဒုန်းကနဲ မြည်တော့ ကျမလည်း ရုတ်တရက်လန့်သွားတာပေါ့။
ကိုအာဒမ် သူ့ကိုယ်ကို ကုန်းပြီး အော်လိုက်တာတွေ့တော့ အားနာ သွားပြီး ကျမ တို့ မိန်းမသားတွေရဲ့ မိခင်စိတ်ရင်း ကြောင့် ခလေးတွေကို ဥံဖွ လုပ်ပေးသလို၊ ကျမလက်တွေကလည်း သူ့တံတောင်ကို အလိုလို လှမ်းကိုင်လိုက်မိတယ်။ ကျမက သူ့တတောင်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ သူကရဲ့ နောက်လက်တဘက်ကလည်း နာတဲ့ နေရာကို လာကိုင်လိုက်တော့ ကျမ လက်ပေါ်မှာ သူ့လက်ဖဝါးကြီးလာအုပ်ကိုင်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့။ ကျမက အခုပဲ ရေချိုးပြီး ထွက်လာတာမို့ ကျမလက်တွေကပဲ အေးနေလို့လားမသိဘူး၊ သူ့လက်ဖဝါးကြီးတွေက ပူနွေးနေသလိုပဲ။ နောက်ပြီး အဖိုဓါတ်လို့ခေါ်မလား လျှပ်စီး သလိုပဲ ဓါတ်တခု ကြောင့် ကျမ ကိုယ်လုံးလေး တုန်သွားတယ်။ ကိုယ့်တကိုယ်လုံးမှာလည်း တဘက်လေးတထည်ပဲပတ်ထားတာ နောက်ပြီး တစိမ်းယောက်ျားလေး တယောက်နဲ့ အသားချင်းထိလို့၊ ကျမ လက်ကို ပြန်ရုတ်မလို့လုပ်တော့ ကိုအာဒမ် မလွှတ်ပဲ ဖိကိုင်ထားတယ်လေ။
ကျမသူ့မျက်နှာကို မော့ကြည့်လိုက်တာ့လည်း သူ့မျက်လုံးတွေက မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ရင်လျှားထားပေမဲ့ ပစ္စည်းရှိလူတန်းစား ကျမရဲ့ မို့မေါက်နေတဲ့ ရွှေရင်အစုံအပေါ်ပိုင်းကို ငှေးစိုက်ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်။ ကျမလည်း ရှက်သွားပြီး လက်ကို ခပ်ဆပ်ဆပ်ကလေး ဆွဲယူလိုက်တော့မှ သူလည်း သတိယသွားပြီး လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ “ အိုး ဆောရီးနော် မသက် “ ကမန်းကတန်းပဲ အိမ်သာခန်းထဲ ပြေးဝင်သွားလေရဲ့။ သူ့ရဲ့ ကိုးယိုးကိုးယား၊ မူပျက်သွားတဲ့ ပုံကို ကြည့်ပြီး ကျမ စိတ်ထဲ ရီချင်လာတယ်။ ယောက်ျား တွေများ အဲလိုပဲလားမသိဘူး၊ မိန်းမ ကိုယ်ပေါ်က နေခိုအသားလေး တွေများတွေ့လိုက်ရရင် တခါထည်း၊ လူချီး ပုံအကြီးကြီးတွေ့လိုက်ရတဲ့ ခွေးဝဲစားလိုပဲ၊ လျှာဟတ်ထိုးနဲ့ အမြှီး တနှံ့နှံ့။ အိနြေ္ဒ ကိုမရ ဖြစ်ကုန်ကြတာပဲ။ ကျမလည်း အခန်းထဲ ကမန်းကတမ်းဝင်လာပြီးအခန်းတံခါးကို ပိတ် အထဲက ဂလန့်ချထားလိုက်တယ်။ တော်ကြာကိုယ်အဝတ်အစားလဲနေတုန်း နောက်တယောက် တံခါးမှားပြီးလာဖွင့်နေအုန်းမယ်။ ကျမတို့ အခန်းထဲမှာတော့ မင်္ဂလာကုတင်ကြီးကတော့ အားရစရာကြီးပါရှင်၊ ပန်းနုရောင် အခင်း၊ ပန်းနုရောင် ခေါင်းအုံးစွတ်၊ ခွလုံး၊ ပန်းနုရောင်ဇာခြင်ထောင်နဲ့ အင်း၊ နေ့ခင်းမင်္ဂလာဆောင်ပြီး အိမ်ပြန်လာဓါတ်ပုံရိုက်ကြ သေးတယ်လေ၊ စေ့စေ့တွေးကြည့်ရင် ရှက်စရာကြီး ၊ လူတိုင်းတွေးနေမှာပဲ အင်း သူတို့သမီးနဲ့ သူတို့သား တော့ ညကျရင် ဒီကုတင်ကြီးပေါ်မှာ၊ ဟိဟိ။
ဆိုပြီး။ အခန်းတံခါးလည်း ဂလန့်ချထားပြီ ဆိုတော့ ကျမ ကိုယ်မှာပတ်ထားတဲ့ သဘက်ကို ချွတ်ပြီး ကြမ်းပေါ်ဒီအတိုင်း ပုံချလိုက်တယ်။ ကုတင်ဘေးက ကျမ အလှပြင်မှန်တင်ခုံပေါ်က မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်မိတယ်။ နောက် ခေါင်းပေါ်ပတ်ထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ဖြည်လိုက်ပြီး ဆံပင်တွေကို သဘက်နဲ့ ပွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ ကိုကိုညီဝယ်ပေးထားတဲ့ ဟဲရားဒရိုင်ရာ အသစ်ကလေးနဲ့ နည်းနည်းမှုတ်လိုက်တယ်။ တကယ်တော့ ကျမ ဆံပင်က တိုတိုလေးပါ ပုခုံးထောက်ရုံပဲထားတာ။ မင်္ဂလာဆောင် အတွက် အလှဖန်တီးရှင် လေးတွေ ဝိုင်းပြီး ဆံထုံးအတုတွေ တတ်၊ ပေးထားလို့ ဓါတ်ပုံတွေမှာတော့ ဆံထုံးအကြီးကြီးခေါင်းပေါ်ရောက်နေတာ။ ခစ်ခစ်။ မျက်နှာကို လိုးရှင်းလေး နည်းနည်းပွတ်လိုက်တယ်၊ မျက်ခုံးလေးလည်း ထင်းသွားအောင် ရက်ဗလွန်ခဲဆံလေးနဲ့ နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်တယ်၊ နူတ်ခမ်းကိုတော့ အရောင်မရှိတဲ့ လစ်ပလော့လေးပဲ နည်းနည်းပွတ်ပြီး ကျမရဲ့ နူတ်ခမ်းထူထူ အနားလေးတွေကို ထင်းသွားအောင် ခဲဆံပါးပါးလေး နဲ့ ဆွဲလိုက်တယ်၊ ဆံပင်ကို ဘရှပ်လေးနဲ့ ဖွဖွလေးသတ်လိုက်ပြီး ခေါင်းလေးခါပြီး သူ့အော်ရီဂျင်နယ်အတိုင်းပုခုံးပေါ်ဝဲကျနေအောင်လုပ်လိုက်တယ်။
အဲလိုဆံပင်ပုံလေးရအောင် ပိုက်ဆံအများကြီးပေးပြီး စင်္ကာပူက ပြန်လာတဲ့ မမဆလွန်းမှာ သွားညှပ်ထားရတာလေ။ မြန်မြန်လုပ်မှ ပါ။ ကျမထွက်သွားမှ ဟိုလူတွေ အားနာပြီးထပြန်မှာ ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားလို့ကတော့ မကုန်မချင်းနှလုံးသွင်းထိုင်သောက်နေကြမှာ။ သူများမင်္ဂလာဦးညလားဘာလားမသိအားမနာလျှာမကျိုး။ ကိုကိုညီ့ အကိုကြီးကလည်း မန္တလေးမှာ နေပြီး ညီကို မတွေ့ရတာ ကြာပြီ စကားမပြောရတာ ကြာပြီ ဆိုပြီး အရမ်းကို စကားများတာပဲ။ သူ့နာမည်က ကိုဘိုဘို ဒါပေမဲ့ အာတော်တော်များလို့ အာဘိုဘို လို့ ခေါ်ကြတယ်တဲ့။ အဲဒီကနေမှ နောက်တော့ တဖြည်ဖြည်း အာဘို ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပဲ၊ အခုကျတော့လည်း နာမည်ရင်းပျောက်ပြီး ကိုအာဘို ဖြစ်နေပြီတဲ့။ ခစ်ခစ် ဘယ်လိုလူကြီးလည်းမသိဘူး။ ခုလည်း မိန်းမတွေခလေးတွေထားခဲ့ပြီး မန္တလေးကနေ ဆိုင်ကယ်တစီးနဲ့ဆင်းလာတာတဲ့။
အင်း မြန်မြန်လဲမှ ပါလေ ဆိုပြီး ၊ကျမလည်း လွယ်တဲ့ ကျားသစ်ကွက်အဆင် ဖင်ကြားညှပ်အတွင်းခံလေး ကမန်းကတမ်းကောက်စွတ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီ အတို လက်တထွာလောက်လေး အနားတွေ တမင်စုတ်ဖွာထားတဲ့ဟာလေးကို အပေါ်က ထပ်ဝတ်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ ယိုးဒယားဘရာဇီယာပျော့ပျော့ အသားရောင်ကိုဝတ်၊ အပေါ်က တီရှပ် အမဲလက်တိုခါးတိုလေးကို ကောက်စွတ်လိုက်တယ်။ အဲတီရှပ်က နည်းနည်းတော့ လည်ပင်းပေါက်ကျယ်တယ်။ ခါးကလည်းတော်တော်လေးတိုတယ်။ အိမ်နေရင်းပဲလေ ဆိုပြီးတော့ အိမ်ရှေ့ခန်းဘက်ကို ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။ အမလေးတော် ကိုအာဘို ယူလာတဲ့ အရက်တလုံးလုံးတောင် ပြောင်ကာနီးပါရော့လား၊ ကိုကိုညီကတော့ ခေါင်းတောင် သိပ်မထူနိုင်တော့သလိုပဲ။ ကိုအာဘို တယောက်ပဲ အာနေပါလား။ ဘေးက စကားမပြောပဲ အမြီးပဲထိုင်စားနေတဲ့ ကိုကိုညီ့သူငယ်ချင်း မစ္စတာအမီးဂိုးစ် ကတော့ အရက် ခွက်ကိုဇိမ်ဆွဲသောက်နေလေရဲ့။ ခုန ရေချိုးခန်းတံခါးနဲ့တိုက်မိသွားတဲ့ ကိုအာဒမ် ကတော့ ကျမ ကို အခုမှ တွေ့ဘူးသလိုပဲ မျက်လုံးအပြူးသား ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ငေးကြည့်နေတယ်။ဟင့် သွားရည်တောင်ကျနေပလားမသိဘူး။
ခွိ။ ကျမဝင်လာတာကိုတွေ့တော့ မှ ကိုအာဘိုက လှမ်းကြည့်ပြီး။ “ ဟေး လာလာ ညီမလေး သက်ချိုပြုံး ၊ ညီးရေချိုးသွားတာ တောက်တောက်ကျနေ ပလားလို့ငါတို့တောင် ပြောနေကြတာလေ.. ရေစက်တွေပြောတာပါ။ ဟီးဟီး” သူ့ဘာ့သာပျက်လုံထုတ်ပြီး သူ့ဘာသာရီနေတဲ့ ကိုအာဘို ကိုကြည့်ပြီး ကျမ မချိပြုံးပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ ……… အဲဒီအချိန်မှာပဲ စကားမပြောပဲ ငြိမ်နေတဲ့ မစ္စတာ အမီးဂိုးစ် က၊ “ကဲ ကျနော် လေဆိပ်လစ်ရအုန်းမယ် ကိုအာဘို၊ ကိုအာဒမ်၊ ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်မှာပို့ပေးခဲ့ရမလဲ” “ ရတယ် အမီးဂိုးစ် ကျနော်က အပေါ်ထပ်က အဖေ တို့အိမ်တက်အိပ်မှာ အာဒမ့်ကိုသာခေါ်သွားလိုက်တော့” “အိုကေ ဒါဆိုရင်လည်းသွားမယ်လေ၊ ဂွတ်နိုက်ကိုအာဘို၊ ဂွတ်နိုက် မသက်ချိုဦး ကျနော်တို့လစ်ပြီ” “ ဟုတ် မစ္စတာအမီးဂိုး၊ ဂွတ်နိုက် အန်ဆွိဒရင်း မောင်လေးအာဒမ် ဘိုင်ဘိုင်” ကျမရဲ့ လင်အသစ်ကျပ်ချွတ်ကတော့ ခေါင်းငိုက်စိုက်နှင့်ဖြစ်နေပြီ။ “ကိုကြီးအာဘို ကိုကိုညီ့ ကို အခန်းထဲ မှာသွားသိပ်ရအောင် ကူညီပါအုန်း” “အေးအေး နင်ဖယ် ငါတွဲခေါ်သွားလိုက်မယ်” ကိုအာဘို တယောက်သူ့ညီကို လက်တဖက်ပုခုံးပေါ်တင်မပြီး တွဲခေါ်လာခဲ့တယ်။
ကျမတို့ အခန်းထဲ ရောက်တော့ ကုတင်ပေါ်အသာလှဲတင်ပေးလိုက်ပြီး သူ့ညီကို သူခနငုံ့ကြည့်ပြီး ခေါင်းတတချက်ခါလိုက်ပြီး၊ “ အင်း ဒီကောင်ကတော့ ကွာ မင်္ဂလာဦးညမှာတောင် ထိန်းမသောက်ဘူး” ကျမလည်း ဘေးက ဝင်ပြီး ခေါင်းအုံးတွေ နေရာချပေး ကိုကိုညီ ကိုယ်တွေလက်တွေ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင်အနေအထားပြင်ပေးနေမိတာပေါ့၊ ကိုယ့်လင်ဖြစ်နေပြီမလား၊ တော်ကြာ မနက်အိပ်ယာထ မှ ဟိုကနာတယ် ဒီကနာတယ်၊ အကြောလွဲချင်သလိုဘာလိုလို ဖြစ်နေရင် မခက်ပါလား။ ကျမက ကုတင်ဘေးကနေ အဲလိုကိုကိုညီ ကိုလုပ်ပေးနေရတော့ ကိုယ်ကို ကိုင်းညွှတ်ထားရတယ်မလား၊ ကျမရဲ့ တီရှပ် လည်ပင်းကျယ်ကြီးကလည်းဟိုက်လို့၊ ပထမတော့ သတိမထားမိဘူး။ ကိုအာဘို မလှုပ်မရှားနဲ့ငြိမ်နေပါတယ် ဆိုပြီးမော့ကြည့်မိတော့မှ။ အမလေး။ ကိုအာဘိုကြီး ကျမ ရင်ဘတ်ကို မျက်လုံးကြီးအပြူးးသားနဲ့ ကြည့်နေပါလား၊ တံတွေးတွေလည်း မျိုချနေလို့ထင်တယ်၊ လည်ပင်းက ဇလုပ်ကြီးကလည်း အပေါ်တက်အောက်ဆင်းနဲ့။
အောက်မှာဝတ်ထားတဲ့ စတိုင်ဘောင်းဘီကလည်း အပျော့ စား ဆိုတော့ ငေါဖောင်းထွက်နေတာကလည်း၊ ငှက်ပျော်သီးကြီးဖွက်ထားသလိုပဲ။ ခစ်။ “ ကိုအာဘို.. သွား ဘာကြည့်နေတာလည်း သူများကို” ကျမ ခတ်တည်တည်နဲ့ ငေါက်လိုက်မှ၊ ရုတ်တရက် အသက်ဝင်လာသလို ဖြစ်ပြီး၊ “ ဟာ ဘာမှ မကြည့်ပါဘူး မိသက်ရာ ညည်းဘာအကူညီများ လိုသေးလဲလို့ပါ” “ ရပါတယ် ကျမ မှာလက်နှစ်ဘက်ရှိပါတယ် ကိုယ့်ဘာသာလုပ်နိုင်ပါတယ်” ကျမလည်း တမင်ရွဲ့ပြောပြစ်လိုက်တယ်၊ ဟွန့်။ ကိုယ့်ညီမင်္ဂလာဦးညမှာတောင် ခယ်မ ကိုလာဘူးနေသေး တယ်။ ကျမ သူငယ်ချင်း မေနန်းခေါင် ပြောဘူးတာ သွားသတိယတယ်။ သူ့ခဲအို ဆရာဝန်ကြီး ဦးနောင်ရဲ ဆိုရင် သူ့ကို တချိန်လုံးချောင်းနေတာဆိုပဲ။
သူ့အမလစ်တာနဲ့ ဖင်ဆိပ်လိုက် နို့ညှစ်လိုက် လုပ်တတ်တယ်တဲ့။ ခိခိ။ ကိုအာဘို့ ဟာကြီး ကြည့်ရတာတော့ ဘောင်းဘီအောက်မှာတော့ ထွားထွားကြီးလိုပဲ၊ အသည်းတော့ယားစရာ ကြီး၊ အင်းလေ နောက်တော့ ကြုံရင် ကြုံအုန်းမှာပေါ့။ ဒီနေ့ကတော့ ကိုယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ ကိုယ့်လင် အတွက် မတရားရာကျမှာပေါ့။ သူနိုးတဲ့ အချိန် စိတ်လာခဲ့ရင် ကိုယ့်ဘက်က ရယ်ဒီဖြစ်နေရမယ်လေ။ သူ့နာမည်ကလည်း ညီညီလင်း ဆိုတော့ လင်းဆွဲ များသန်မလားမသိဘူး ခစ်ခစ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ၊ နူတ်ခမ်းနီတောင့်လေးလောက်မသေးရင် ပြီးတာပါပဲ။ “ ကဲ ကိုအာဘို မသွားသေးဘူးလား မီးလည်းအိပ်ချင်ပြီ” မတတ်နိုင်တော့ ဘူး အလိုက်မသိတတ်တဲ့လူကို ပေါ်တင်ပဲ နှင်ထုတ်ရတော့မှာပဲ။ “ အေးပါ အေးပါ ငါသွားတော့မှာပါ၊ ငါ့ညီလေးကို ဂရုစိုက်ပါကွာနော်” ကိုဘိုဘို တယောက် သူ့အဖေအမေရှိရာ အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားမှ တံခါးပြန်ပိတ်။ အိမ်ရှေ့ခန်းက ပွနေတာတွေကို ရှင်းချင်စိတ်လည်းမရှိသေးတာနဲ့ မီးတွေပဲ ပိတ်ပြီးအခန်းထဲ ဝင်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။
ကိုကိုညီတယောက်ကတော့ ကွေးကွေးလေး အိပ်လို့ကောင်းတုန်း၊ အဲဒါနဲ့ ကျမလည်း ဇာခြင်ထောင်ကိုချ မွေ့ယာပတ်လည်လိုက်ဖိပေးပြီး ညမီးလေး တလုံးပဲ ဖွင့်ထားလိုက်တယ်။ နောက်တော့ ဝတ်ထားတဲ့ ရှော့ပင်တွေ ဘရာဇီယာတွေ အကုန်ချွတ်ပြီး ဘေဘီဒေါ ညဝတ်အင်္ကျီပန်းရောင်လေး ဝတ်လိုက်တယ်။ ဟောတော့ အသားကလည်းပါးလိုက်တာ ကျမ နို့သီးခေါင်းပန်းနုရောင်ရင့်ရင့်လေးကိုတောင် ညမီးရောင်အောက် ကနေ ထိုးဖေါက်မြင်နေရပါလား။ အင်းလေ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျမ အိပ်ပျော်သွားပြီး ကိုကိုညီ တရေးနိုးထလာရင် သူ့မယား အသစ်ချပ်ချွတ်ကလေးကို ဆက်ဆီနိုက်တီလေးနဲ့ တွေ့သွားရင် သဘောကျသွားမှာပဲလေ။ ကိုယ့်အတွေးလေးနဲ့ ကိုယ် ကျေနပ်ပြီး ခြင်ထောင်လေးအသာလှပ်လို့ ကုတင်ပေါ်တက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ကိုကိုညီကတော့ ကျမတို့တင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကျမဖက်ကို ကျောပေးလို့ကွေးကွေးလေး အိပ်နေတုန်းပဲ။
သူနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်မောကျနေတာကို ကြည့်ပြီး ကျမ က အင်း သူများတွေ ပြောကြတဲ့ မင်္ဂလာဦး စိတ်လှုပ်ရှားမှုကတော့ လွတ်သွားပြီပေါ့လေလို့တွေးမိပါတယ်။ နောက်သူ့ဂျင်းဘောင်းကြီးနဲ့ အိပ်နေတာ အရမ်းများကျပ်နေမလားမသိဘူး၊ လုံခြည်လေးလဲပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စိတ်ထဲကပေါ်လာပါတယ်။ ငါအခုချိန်ကစပြီး အိမ်ထောင်ရှင်မ တယောက်ဖြစ်လာပြီ ဆိုတော့ အိမ်ထောင်ရှင်မလို ပီပီသသ နေမှ ဖြစ်တော့မယ်၊ ကိုယ့်ယောက်ျားကို ဒီအတိုင်းပေးသိပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့တွေးရင်း အိပ်ယာက ပြန်ထ။နောက်ခြေရင်း ဘီဒိုထဲက လုံခြည်တထည်ထုတ်။ သူ့ကို ပုဆိုးလဲပေးလိုက်တော့မယ် ဆိုပြီး ဂျင်းဘောင်းဘီကို ကြယ်သီးစဖြုတ်ပါတယ်။ နောက် ဇစ်ကို ဆွဲချ၊။ အဲပြီးတော့ ဘယ်လိုချွတ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ သူက ကျမကိုကျောပေးလို့ ကွေးကွေးလေးအိပ်နေတာကိုး၊ ကြယ်သီးနဲ့ ဇစ်ကတော့ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အသာလေး လက်ကျော်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်၊ ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်ဖို့ကတော့ မလွယ်တော့ဘူး ။ အဲတော့ သူခြေကျင်းနား ဘောင်းဘီ အနားစကနေဆွဲချ လိုက်တယ်။
ဟဲဟဲ အလုပ်ဖြစ်လာပြီ ဘောင်းဘီက ဖင်တဝက်ထိတော့ကျွတ်လာပြီ။ ဟဲတော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီက စပွန်းဘောက်စ်စကွဲယားပန့်နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း စတားဖစ်ရ်ှပက်ထရစ်တို့ ကာတွန်းပုံနဲ့၊ ခွိ။ ကလေးတွေ ဝတ်တဲ့ ဘောင်းဘီနဲ့။ ကျမလည်း သူ့ခြေဖျားနားကနေ သူ့တင်ပါးတဝက်လောက်ရောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဘောင်းဘီကို လက်နဲ့ပေါင်ရင်းရောက်အောင် ထပ်တွန်းချလိုက်တယ်။ အဲလိုချွတ်နေရင်းနဲ့ ကာတွန်းပုံလေးက ရီရလို့ အသာငုံ့ကြည့်လိုက်တော့၊ “ ပူ……ရူးးးးးးးးးး” အားနံလိုက်တာရှင်။ ပုတ်လိုက်တဲ့အီး ။ ကျမမျက်နှာတည့်တည့်ကို အချိန်ကိုက်ပဲ လာမှန်တာ၊ မူးတောင်လဲကျသွားမလားထင်ရတယ်။ကျမ အသက်အောင့် ပြီး ခြင်ထောင်ထဲက ကမန်းကတမ်းထွက် ကုတင်နဲ့ဝေးရာ အခန်းထောင့်တနေရာကို အမြန်ပြေးပြီးမှ အောင့်ထားတဲ့ အသက်ကို ရူလိုက်ရပါတော့တယ်။
“ ဟူးးးးးးးးးး” ဘယ်လို မင်္ဂလာဦးညပါလိမ့်။ ကျမ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကို တခုတခု လာထိလို့ အိပ်ပျော်နေရာက နိုးလာခဲ့တယ်။ ကျမ စိတ်ထဲမှာ ဒီလို အထိအတွေ့မျိုး မခံစားရတာ ကြာခဲ့ပြီ ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ တော်တော်လေးကို ပျော်သွားတယ်။ နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာခဲ့ပြီး လို့ ပြန်တောင် မရတော့လောက်ဘူးလို့ထင်ထားခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ်အမြတ်တနိုးထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတခု ပျောက်ဆုံးသွားရာက၊ အမှတ်မထင်ပြန်တွေ့လိုက်ရတော့ ပျော်ရွှင်သွားတဲ့ ခံစားမှုမျိုးရှင်တို့ခံစားဘူးကြမှာပေါ့။ ရေကူးတတ်ပြီးသွားတဲ့လူတယောက်က ရေထဲမဆင်းတာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပေမဲ့၊ ရေထဲကို ခုန်ချလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာက သူ့အလိုလို လှုပ်ရှားပြီး အလိုအလျှောက်ကူး နေမိတာကိုလည်း သိကြမှာပေါ့။ ကျမလည်း အခုအဲဒီအတိုင်းပဲလေ၊ အခုပေါင်ကြားမှာရောက်နေတဲ့ အနွေးဓါတ်လေးနဲ့ စိုစိုစွတ်စွတ်ကလေးက ကျမအပျိုပေါက်စကတည်းက ခံစားဘူးနေတာလေ။ ဘာပြီးရင် ဘာလာမယ်ဆိုတာလည်းသိနေပြီးသား၊ ကျမဘာလုပ်ပေးရမယ် ဆိုတာလည်းစဉ်းစားနေစရာတောင်မလိုဘူး။
ကျမပေါင်နှစ်လုံးကို အလိုလို အသာလေးကားပေးလိုက်မိတယ်။ အဲတော့မှ စိုနွေးနွေး အသားနုနုလေးက ကျမရဲ့ အရသာတောင်ကမူလေး မှာ တို့ထိလို့။ အိပ်ချင်မူးတူး နဲ့လည်းဆိုတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အရသာမျိုးလေး ပဲလေ၊ မျက်လုံးမဖွင့်ပဲ ဇိမ်ခံနေလိုက်မိတယ်။ ပြီးမှ ချက်ချင်းသတိယသွားတယ်။ ဟင်ဒါ ငါငယ်ငယ်ထဲက နေခဲ့တဲ့ ဒေါ်လေးမချိုတို့အိမ်မှ မဟုတ်ပဲ။ မနေ့ကပဲ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့လို့၊ အခု မင်္ဂလာကုတင်ကြီးပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေတာလေ။ မျက်လုံးလေးကို အသာလေးမှေးပြီး ပေါင်ကြားထဲကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့၊ ကိုကိုညီ့ခေါင်း ကြီးက လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့၊ ကျမပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ မျက်နှာအပ်ပြီး ကျမ ရဲ့ ခံစားမှုတောင်ကမူလေးကို ရက်နေတာလေ။ သူ့လျှာနွေးနွေးကြီးနဲ့ အကွဲကြောင်းလေးတလျှောက် အစုန်အဆန်ရက်ပေးနေပြီး မသိမသာလေးဖုထနေပြီ ဖြစ်တဲ့ အရသာဖူးလေးကိုလည်း လျှာထိပ် ကလေးနဲ့ထိုး လိုက်သေးတယ်။ အင်း ကျမခံစားခဲ့ဘူးတဲ့ ပုံစံနဲ့မတူပေမဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်လေးက အဆန်းသား မို့ အသာလေး ဖီးခံနေလိုက်မိ တယ်။ သူ ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် လှုပ်ရှားလို့ရအောင်လည်း ပေါင်ကို ပိုဖြဲပေးလိုက်မိတယ်။
သူက လျှာကို မာမာလေးလှုပ်ပြီး ကျမ ပိပိအကွဲကြောင်းလေးထဲ ထိုးထည့်တော့၊ သူ့လျှာကပဲတိုလို့လား၊ ကျမကပဲ လောဘကြီးလို့လား မသိ။သူ့လျှာမမှီတဲ့နေရာက ယားတားတားဖြစ်လာတယ်။ မခံနိုင်တော့လို့ အထဲများ နည်းနည်းပိုရောက်မလားလို့ ကျမဖင် ကိုကော့ပြီး သူ့ပါးစပ်နဲ့ ကျမ ဖုတ်ဖုတ်လေးကို လိုက်ကပ်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့ခေါင်းက နောက်ကို ဆုတ်သွားသလိုပဲ။ အဲဒါနဲ့ ကျမလည်း လက်တဖက်နဲ့ သူ့ခေါင်းကို ဖိကိုင်ပြီးမှ ဖင်ကိုကော့ပြီး ဖိကပ်လိုက်မိတယ်။ “ ဖူး.. ဖလူး..အူးးးးးးး” သူအသက်ရူကျပ်ပြီး မွန်းသွားလားမသိဘူးရှင့်။ ကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ်တောင် အားနာသွားမိတယ်၊ ကျမပေါင်နှစ်လုံးကို လက်နဲ့ဖိချပြီး အတင်းထရုန်းတော့တာကိုး။ ကျမလည်းသူ့ခေါင်းကို ဖိထားတဲ့ ကျမလက်ကို ကမန်းကတမ်းပြန်လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ အဲတော့မှ သူက ကျမပေါင်နှစ်လုံးကြားကနေ ခေါင်းထထောင်ပြီး မော့ကြည့်လာတယ်၊ ကျမ ရဲ့ ရှေ့တော်ပြေးအရသာ အရည်ကြည်တွေနဲ့ ရောင်ပြန်လက်နေတဲ့ သူ့နှာခေါင်းပါးစပ်မေးစေ့တွေကို ကြည့်မိပြီး သူ့ကို သနားသွားတယ်။
“သက်လေး မနေ့က ဘာတွေစားထားသေးလဲ” ဟင် သူဘာလို့မေးလဲတော့မသိဘူး။ “ပုံမှန်ပါပဲ ကိုနဲ့တူတူ စားကြတာပဲလေ ဘာဖြစ်လို့လဲ” “ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးကွာ၊ ဒညှင်းသီးများစားမိသေးလားလို့” “အော်အင်း ခုမှ သတိယတယ် ညနေဘက်ဒင်နာသွားစားကြတဲ့ဆိုင်က ဒညှင်းဝက်ကြီးတွေ ကောင်းလိုက်တာ ဆိုပြီး အများကြီး ငပိရည်နဲ့တို့စားခဲ့သေးတယ်။ မျှစ်ချင်တို့ ကတက်ချင် တို့ရော တို့စရာတွေ စုံလို့လေ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ကို” “ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးကွာ မေးကြည့်တာပါ” ကိုကိုညီက ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကျမပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ ဒူးထောက်နေရာကနေပြီး ကျမကိုယ်ပေါ်ကို အလျှားလိုက်မှောက်တက်လိုက်တယ် ကျမ နူတ်ခမ်းတွေကို သူ့နူတ်ခမ်းတွေနဲ့ လာပြီး စုပ်တော့တယ်။ အင်း ဒညှင်းသီးနံ့သင်းသင်းရသလိုပဲ လို့တော့တွေးမိတယ်။ ကျမ က အခု စိတ်တွေ တအားထနေပြီ ဆိုတော့ အဲဒါကို သိပ်ဂရုမစိုက်တော့ပါဘူးလေ၊ သူက ဆွထားပြီးပြီ ဆိုတော့ သူဆက်လုပ်သင့်နေတာပဲ မဟုတ်လား။
သူက ကျမဂျိုင်းအောက်လက်လျိုသွင်းလို့ အိပ်ယာပေါ် တတောင်တဖက်ထောက်ရင်းမှ ကျမညဝတ်အင်္ကျီလေးကို လယ်ပင်းထိလှန်တင်လိုက်တယ်။သူ့လက်ဖဝါးကြီး နဲ့ ကျမရဲ့ နုနုနယ်နယ် အသားအိအိ ကျွဲကော်သီးလောက် ရင်သားတွေကိုတော့ အားမနာတိုင်း ဆုပ်ညှစ်နှယ်ဖတ်တော့တာပဲရှင်။ ကိုယ့်လင် နဲ့ ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံမို့လို့ပေါ့။ ပြောရမှာ အားနာတာနဲ့ ကျိတ်မှိတ်ခံနေလိုက်ရတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ မိန်းခလေးတွေရဲ့ ရင်သား ကို အဲလိုတခါမှ မကိုင်ဖူးဘူးလားမသိပါဘူးရှင်။ ကျမ ရဲ့ စန်းစန်းတင့်၊ အထိမခံ ရွှေပုဂံ နို့သီးခေါင်းလေးတွေတောင်နာကျင်လို့။ ဒါပေမဲ့ တခါတလေ အဲလိုကြမ်းကြမ်းလေးကလည်း စိတ်ကို ပိုကြွ စေတတ်တယ်ရှင့်။ ကျမ ရဲ့ ခံစားမှု တောင်ကမူမှာ အရသာချော်ရည်တွေက တသွင်သွင်စီးကျနေရပြီလေ။ သူက ကျမရဲ့ ရွှေရင်အစုံကို တအားမဲနေတုန်း ကျမပဲ သူ့ညီတော်မောင် ကို အသာဆုပ်ကိုင်လို့၊ ကျမ ရဲ့ ခံစားမှုလှိုင်ဂူအဝမှာတော့ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်ရှင်။ အဲတော့မှ သူ့ညီတော်မောင်ကို သတိရသွားတယ်ထင်တယ်ရှင်၊ အီးကနဲ့ တချက်အော်ပြီး ဖင်ကြီးကြွလို့ တဖန်းဖန်းအသံထွက်အောင်ကို ဆောင့်ပါတော့တယ်။
ကျမလည်း အခုန က အရှိန်ရနေပြီမို့ အဲလိုမျိုးလုပ်တာကို ပိုသဘောကျမိသလိုပဲ၊ ပထမတုန်းကတော့ တခါမှ လူစိမ်းမရောက်ဘူးတဲ့ လှိုင်ဂူ ထဲ အတင်းဝင်ရောက်တာခံရ သလိုဟန်သရုပ်ဆောင်မလို့ ကြံထားတာတွေလည်း ပျောက်ကုန်တော့တယ်။ သူ့ရဲ့ ဆောင့်ချလာတဲ့ အရှိန်ကို ပိုကောင်းအောင် သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကို ကျမခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ ခွ ခြေခတွင်ချိတ်ပြီး ဆွဲဆွဲချပေးမိသေးတယ်။ တော်သေးတာပေါ့ ကျမ အရှိန်တော်တော်ရနေလို့ သူက သိပ်မကြာဘူးရှင့် ခနလေးမှာပဲ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ထွက်ကုန်တော့တယ်။ ကျမလည်းတကယ်ပြီးသွားတာ ဆိုတော့ သိပ်ဟန်မဆောင်ရတော့ဘူးပေါ့၊ သူ့ကျောပြင်ကို အလိုလို တင်းတင်းကြီးဖက်ထား လိုက်မိပါတော့တယ်ရှင်။ အော် အဲဒါကြောင့်လည်း သူ့အကို ကိုအာဘို ပြောသွားတာကို သူ့ညီက လင်းဆွဲ ဆိုတာ။
ခစ်ခစ်။ နောက်ဆိုရင် ညဘက် စောစောအိပ်ထားမှ ထင်တယ်။ ………. မနက်ကျတော့ အိပ်ယာက မထချင်ပေမဲ့ အဲလိုကြီးအိပ်နေလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးရှင့်၊ ခုမှ ရကာစ ကျမကို အပျင်းမ ထင်သွားအုန်းမယ်။ ကျမ ရေချိုးခန်းဝင် သွားတိုက် ပြီး ကိုယ်တုန်းလုံးချွတ် ရေကို စိမ်ပြေနပြေ ချိုး နေလိုက်တယ်။ ခေါင်းလည်းလျှော်၊ နောက် ပေါင်ခွဆုံကြားက စေးကပ်ကပ် ဖြစ်နေတာတွေလည်း ဆပ်ပြာနဲ့ သေခြာတိုက်ချွတ်ဆေးကြောလိုက်တယ်။ ဟိုရုပ်ရှင် တွေထဲက လိုများ ရေချိုးနေတုန်း ယောက်ျား က အတူချိုးလို့ရမလားဆိုပြီး၊ နိကပ်နဲ့ ဝင်လာမလားလို့၊ ရေချိုးခန်းတခါးကိုလည်း ဂလန့်မချထားလိုက်ဘူးရှင့်။ ရေချိုးပြီး မျက်နှာသုတ်ပုဝါလေးကိုယ်မှာပတ် ထွက်လာတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ကိုကိုညီ တယောက်အိပ် နေတုန်း။ အင်း မနေ့ညက အရှိန်မပြေသေးဘူးထင်တယ်။
သောက်တာကမှ ဘီယာလေး တဗူးနှစ်ဗူး။ ဒေါင်ခြာစိုင်းနေပြီ။ ကိုအာဘို တို့ကတော့ အရက်တလုံးလုံးတောင် တယောက်ထဲ ထိုင်သောက်မဲ့ပုံပဲ။ ကြွတ်တွင်းတောင် မဟုတ်ဘူး ဘလက်ဟိုး လားမသိဘူး ခစ်ခစ်။ မှန်တင်ခုံရှေ့ထိုင်ပြီး မိန်းမတို့ထုံးစံ လှတပတလေး တွေလုပ်လိုက်တယ်။ မျက်နှာပြီးတော့ ကိုယ်လုံးကို လိုးရှင်း လူးဖို့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ဖြည်ချလိုက်တယ်။ ကျမရဲ့ ရွှေရင်အစုံက ညက ကိုကိုညီတအားဆုပ်ညှစ်ထားလို့ လက်ရာတောင်ထင်ကျန်ခဲ့တယ်။ အဟင့်။ တခါထဲ အာရုံတက်မှ ထကြမ်းတယ် ကိုကိုလင်းဆွဲကြီး။ ခစ်ခစ်။ နည်းနည်းတောင် လက်ယောင်လိုက်လာသလိုပဲ။ တော်ကြာ ဟိုကောင်မ လွမ်းသူ နဲ့တွေ့ရင် ဟဲနင့်ဟာကြီးက ပိုကြီးလာတယ် ဆိုပြီး ပြောနေအုန်းမယ်။ အင်း။ တရက်ထဲနဲ့တော့ အဲလောက်မသိသာနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်က နာနေလို့ စိတ်ထင်နေတာဖြစ်မှာပါ။ ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ ကျမ တကိုယ်လုံးကို လိုးရှင်းလေး လူးနေလိုက်တယ်။ ဟင့် ငါ ကိုယ်တုံးလုံး နဲ့ လိုးရှင်းလိမ်းနေတုန်း ကိုကိုညီ နိုးလာခဲ့ရင်၊ လင်းဆွဲပြီးတော့ ။
နေမြင့်ဆွဲများ ဆွဲနေအုန်းမလားမသိ၊ ခစ်ခစ်။ တွေးရင်း ရင်ဖိုသွားပြီး ကုတင်ဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့။ ကိုယ်တော်ချောက အိပ်ကောင်းတုန်းရှင့်။ ဟောက်လိုက်တာမှ ခရောခရူးခရက်၊ ခဒစ်ဒစ် နဲ့ သံစုံတီးဝိုင်းကြီးတီးနေသလား မှတ်ရတယ်။ ညတုန်းက ဒီလောက်ဟောက်သံကြားမှာ ကျမ အိပ်ပျော်သွားတာတောင် အံ့သြမိတယ်။ တနေ့လုံးမင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲမှာ ပင်ပန်းနေလို့ထင်တယ်။ နောက်နေ့တွေကျရင်တော့ နားထဲ ဂွမ်းဆို့ အိပ်ရမယ်ထင်တာပဲ။ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကလည်း ပင်ပန်းလိုက်တာလွန်ပါရော။ ဟိုသူငယ်ချင်း ဆရာဝန် တရုပ်မကလေး မေသူဟွား ကတော့ သူ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက် အရမ်းကို တက်ကြွနေတာလေ၊ ကျမကို ဟိုဟာမလုပ်ဘူးလား ဒီဟာမလုပ်ဘူးလား လာလာပြောနေတာ။ မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ဓါတ်ပုံမျိုးစုံရိုက်ဖို့ ၊ ဝတ်စုံမျိုးစုံနဲ့ နေရာမျိုးစုံတဲ့၊ ဘုရား၊ ပန်းခြံ၊ ရေကန်၊ တိရစ္ဆာန်ရုံ၊ဂေါက်ကွင်း၊ လေယာဉ်ကွင်း၊ မင်္ဂလာဈှေး၊ မီးရထားရုံး၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ်၊ စူပါမားကက်၊ အိမ်သာ၊ ဟာနေရာအနှံ့ပါပဲ။
နောက်ပြီး မင်္ဂလာဆောင် အခန်းအနားအချိန် အတွင်းမှာလည်း အဝတ်တွေ ဆယ်စုံလောက်လဲဖို့တဲ့။ လာတက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ က အလုပ်မရှိတဲ့လူတွေလားမသိ တနေကုန်ထိုင်စောင့်ရအောင်၊ ခစ်ခစ်။ သူတို့ မပျင်းမယိထိုင်စောင့် နေအောင် ဟင်းခွက်တွေ များများတမျိုးပြီးတမျိုးချပေးတဲ့၊ ခစ်၊ ကုန်လိုက်မဲ့ပိုက်ဆံ၊ မတတ်နိုင်ပါဘူးအေ၊ ကိတ်မုန့်၊ အိုက်စကရင်နဲ့၊ ကော်ဖီ ဆိုရင်တော်ပြီလို့၊ ညည်းမင်္ဂလာဆောင်ကျမှ လုပ်တော့အေ လို့ပြောယူရတယ်။ ဒီလိုရိုးရိုး ဧည့်ခံပွဲတောင် ပင်ပန်းလှပါပြီ။ တကိုယ်လုံးလိုးရှင်းလူး၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ် ထမိန်ဝတ် ဘရာဇီယာဝတ်။ ဒီနေ့ မနက်နေ့လည်စာတော့ ယောက်ျား အမျိုးတွေနဲ့ ကျမ ဘက်က ဒေါ်လေး မချို တို့ လင်မယား ရယ်။ ဗမာထမင်းဆိုင်ပဲ သွားစားကြမယ်ဆိုတော့ တီရှပ်လေးပဲ အပေါ်က ဝတ်လိုက်တော့တယ်။ ဒီနေ့ညနေ ဒေါ်လေးတို့ နယ်ပြန်တာ လိုက်ပို့ပြီး မနက်ဖြန် တော့ ဟန်းနီးမွန်း ချောင်းသာ သွားဖို့တော့ အစီစဉ်ဆွဲထားတာပဲလေ။
ကျမ အားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ်လို့ တောင်မှ မနိုးသေးတဲ့ ယောက်ျားကို ဘာလုပ်ရမလည်းစဉ်းစားနေတုန်း အိမ်ရှေ့က တံခါးခေါက်သံ တဒေါက်ဒေါက်ကြားလိုက်ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကမန်းကတန်း အိမ်ရှေ့ ဘက်ထွက်ပြီး ချောင်းကြည့်ပေါက်က ကြည့်လိုက်တော့ ယောက်ခမကြီး ရှင့်။ ယောက်ခမကြီး ဆောင်းဟေမန် အခန်းဝကနေ ခေါက်နေတာ။ “ ဟေး ဘယ်လိုလဲ နိုးနေကြပြီလား၊ “ “ဟုတ်ကဲ့မေမေ ကိုညီတော့ အိပ်တုန်း နိုးလိုက်မယ်လေ” “အေးအေး အပြင်ထွက်စားရအောင်လို့ နိုးလိုက်ပါကွယ်၊ ခစ်။ ဒါနဲ့ မသက်ရေ တို့ကို မေမေ လို့မခေါ်ပါနဲ့ကွာ၊ အသက်အရမ်းကြီးသွားသလိုပဲ။ မမ က အဲလောက်မကြီးသေးပါဘူး ကွယ်” “ အော် ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ မမ” “အိုကေ လေ ရယ်ဒီဖြစ်ရင်ပြောလိုက် အပေါ်က ကိုတော်တွေကိုလည်း ပြင်ခိုင်းထားလိုက်မယ်” ပြောဆိုပြီး လှေခါးပေါ်ပြန်တက်သွားတဲ့ ယောက်ခမကြီး ရဲ့ ဖင်လုံးလုံးလေးကို ကြည့်ပြီးပြုံးမိတယ်။ အမလေး မမ မကြီးတာ ကျမသိပါတယ်၊ အင်တာနက်ထဲ တွေ့ဘူးတာပဲလို့ ပြောလိုက်ချင်စိတ်ကို အောင့်ထားရတယ်၊ ခစ်ခစ်။
တကယ်တော့ မမဆောင်းဟေမန်က ကိုကိုညီ့ အမေရင်းမဟုတ်ဘူး၊ ကိုကိုညီ့ ဖေဖေ ဦးရဲထောင် ရဲ့ မယားငယ်လေး။ သူက အရင်တုန်းက မော်ဒယ်လည်းလုပ်ဘူးတယ်၊ အင်တာနက်ထဲ သူကိုယ်တုံးလုံး နဲ့ လိုးရှင်းလူးနေတဲ့ ဗီဒီယို တယ်လီဖုန်းကင်မရာနဲ့ ခိုးရိုက်ထားတာ ထွက်လာတော့ လူတွေ အလုအယက်ဒေါင်းလုပ် လုပ်လိုက်ကြတာ။ ကျမလည်း ဘာလည်းလို့ ကြည့်မိပါတယ်။ ခစ်ခစ်။ သူ့စနေနှစ်ခိုင်က ကျမလောက်တောင်မရှိဘူး အဟိ။ ထားပါတော့လေ ခုတော့ ကိုကိုညီ့ကို သွားနိုးလိုက်အုန်းမယ်။ ………. ထမင်းဆိုင် ရောက်တော့ လူ၁၀ ယောက်စာလောက် ဝိုင်းမှာထားလို့ သူတို့ ကပြင်ထားပေးတယ်ရှင့်။ ကျမတို့ လင်မယားရယ်၊ ကျမခဲအို ကိုဘိုဘို ခေါ် ကိုအာဘို ရယ်။ ယောက်ခထီးကြီး ဦးရဲထောင်၊ နဲ့ သူဇနီးငယ်လေး ဆောင်းဟေမန်၊ ကျမ အဒေါ် ဒေါ်လေးမချိုရယ် သူ့ခင်ပွန်း ဦးဇော်အောင်ရယ်၊ နောက် ဦးမဟော်ဂနီဆိုတဲ့သူကြီးရယ်၊ သူနဲ့ တွဲလာတဲ့ ကောင်မငယ်ငယ်လေး မိုးဦးဝသုန် ဆိုလား။
အဲဒါလေးရယ် ပေါ့။ စားရင်းသောက်ရင်း နဲ့ မနေ့က အတွေ့အကြုံတွေ ပြန်ပြောဖြစ်ကြတာပေါ့ရှင်။ ဦးရဲထောင် ရယ်၊ ဦးဇော်အောင်ရယ်၊ ဦးမဟော်ဂနီရယ်က ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ဆိုပဲ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဦးရဲထောင်က သူ့သား လူပျိုကြီးကို ဦးဇော်အောင်က နေတဆင့်၊ ကျမနဲ့ လက်ဆက်ပေးဖို့လာကြောင်းလမ်းတာကနေ၊ ဒေါ်လေးမချိုကလည်း သဘောတူပြီး အခုလို ယူဖြစ်သွားတာပါပဲရှင်။ ကျမ ကို ငယ်ငယ်ထဲက ဒေါ်လေးမချိုက မွေးစားပြီး ကြီးတဲ့အထိ ပျိုးထောင်ခဲ့တာလေ။ အဲတော့ ဒေါ်လေး တို့ လင်မယားက ကျမရဲ့ မိဘတွေဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့။ အခု မင်္ဂလာဆောင်ကို လာကြတာလေ၊ ညနေကျရင် သူတို့နယ်ကို သူတို့ပြန်ကြတော့မှာလေ။ စားပွဲ ရှည်ကြီး ဆိုတော့ ကြုံသလိုထိုင်လိုက်ကြတာ၊ ကျမညာဘက်မှာ ကိုကိုညီ ထိုင်ပြီး ကျမဘယ်ဘက်မှာတော့ ဦးဇော် ပေါ့။ စကားတပြောပြောစားရင်းသောက်ရင်းနဲ့ တချိန်မှာ ကျမပေါင်လုံးလေးပေါ်ကို လက်ဝါးတဖက်ရောက်လာတယ်။ စားပွဲခင်း က အနားကို အရှည်ကြီးချထားတော့ အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လည်းမမြင်ရဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဘက်ပေါင်ဆိုတော့ ဘယ်သူဖြစ်ရမလည်း။ ဟင့် ဦးဇော်ပေါ့။ သူ့မျက်နှာကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ ဘာမှ မဖြစ်သလိုနဲ့၊ ခက်ရင်းနဲ့ဇွန်းကို ချထားပြီး ဘယ်ဘက်လက်က ရေနွေးကြမ်းခွက်ကို မှုတ်သောက်နေတယ်။
သူ့ညာဘက်လက်က သူ့ပေါင်ပေါ်တင်ထားတယ်လို့ပဲ လူတွေက ထင်ကြမှာပဲ။ တကယ်က ကျမပေါင်ပေါ်မှာရှင့်။ ဦးဇော်ရဲ့ လက်ကြီးက ကျမ ပေါင်တွင်းသာကို ထမိန်သားတထပ်ထဲရှိတဲ့နေရာကနေ ပွတ်နေတာဆိုတော့ အသားချင်းထိနေသလိုပဲ။ ကျမ ဘယ်ဘက်လက်ကို အသာအောက်ချပြီး သူ့လက်ကြီးကို ကျမလက်သည်းလေး နဲကဆိတ်လိုက်တယ်၊ တကယ်ပဲ လူကြားထဲမှာ။ သူက သူ့လက်ဖဝါးကို ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး ကျမလက်ကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်တယ်။ အိုခက်တော့တာပဲ။ ကျမ သူ့ကို မျက်လုံးလေး မသိမသာ ဒေါင့်ကပ်ကြည့်လို့တော့ ပြုံးစေ့စေ့ လုပ်နေတယ်။ ဟွန့်။ ညနေဘက် ဒေါ်လေးမချိုနဲ့ ဦးဇော်တို့ လင်မယားကို ဘူတာရုံလိုက်ပို့ကြတယ်၊ ဒေါ်လေးမချိုက အိမ်သာ သွားနေတုန်း ကိုကိုညီ့ကို ဦးဇော်က ကွမ်းယာ စားချင်တယ် ဆိုလို့ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်သွားဝယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်။ လူလစ်သွားတာနဲ့ တိုင်ကွယ်လေးမှာ ဦးဇော်ရယ်ပေါ့။ ကျမပါးကို ရွှတ်ကနဲ လာနမ်းတယ်လေ။
“ အို့ ဦးဇော်.. ကိုကိုညီ တွေ့သွားအုန်းမယ်လေ” “ မတွေ့ နိုင်ပါဘူးဟာ သူက အခု ဟိုးဘက်မှာကို” “ မကောင်းပါဘူး ဥိးဇော်ရယ်” “ အင်း သဲယေး ဦးဇော် တို့ဆီ လာလည်အုန်းနော် ဟုတ်လား၊ “ “ အင်းပါဦးဇော်ရဲ့၊ လာမှာပါ၊ စိတ်ချပါ” ဦးဇော်က ကျမကို လူတွေရှေ့ကျရင် သရဲမ လို့ခေါ်ပြီး ကွယ်ရာမှာ ဆိုရင် သဲယေးလို့ခေါ်တယ်လေ။ ကျမငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းဆော့ ပြီး ညစ်ပတ်ပေရေ နေတာကို သရဲနဲ့ တူတယ်ဆိုပြီ သရဲမ၊ သရဲမ နဲ့ခေါ်ရာကနေ၊ နာမည်ပျက် သရဲမ ဆိုပြီးတွင်နေတော့တာပေါ့။ ဦးဇော်က တော့ အဲဒါနဲ့ရောထွေးပြီး ကျမကို သဲယေး လို့ခေါ်တယ်။ အဲတုန်းကသူ့ရှေ့သွား ကျိုးသွားပြီး ပြန်မစိုက်နိုင်သေးတော့ လေထွက်နေပြီးမပီတာလည်းပါမှာပါ။ နောက်တော့ ဒေါ်လေးမချို ရွှေလက်ကောက်တကွင်းရောင်းပြီး ရွှေသွားစိုက်ထားတာ ရှေ့မှာ တဝင်းဝင်းနဲ့ပေါ့။ ဒေါ်လေးမချိုကတော့ ကျမကို ယောက်ျားကို ရိုရိုသေသေ ပြုစုဖို့၊ ဘယ်လိုစည်းနဲ့ကမ်းနဲ့နေဖို့ အဲဒါတွေ မှာကြားပြီး မျက်ရည်တစမ်းစမ်းနဲ့ လက်တပြပြနဲ့ ရထားကြီး ခေါ်ဆောင်ရာကို ပါသွားပါတော့တယ်။
ကျမ နဲ့ ကိုကိုညီကတော့ မနက်ဖြန် ဟန်းနီးမွန်း ထွက်မှာရယ်။ ကျမက အိမ်ထောင်ကျပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းကြီးလည်း ခလေးမလိုချင်သေးတာရယ်ကြောင့်၊ တိုင်ပင်ရအောင်ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်၊ ဆရာဝန်လည်းဖြစ်တဲ့ မေသူဟွား ဆေးခန်းကို ဝင်လိုက်ကြတယ်။ မေသူဟွား ဆေးခန်းရောက်တော့ သူနဲ့စေ့စပ်ထားတယ် ဆိုတဲ့ ကိုမောင်ငယ် ဆိုတဲ့လူကြီးလည်းရောက် နေတယ်၊ ကြည့်ရတာ ပျော့ပျော့ ပျော့ပျော့ နဲ့ မေသူ့ ကိုနိုင်မယ့်ပုံမပေါ်ပါဘူး ခစ်ခစ်။ “ ဟဲ့ကောင်မ ဘာလာလုပ်တာလည်း” “ ဟိုကိစ္စလေဟာ ညီးကလည်း ခစ်ခစ်” တကယ်က သူ့ကို ဖုံးနဲ့ပြောပြီးသား၊ အလကားစနေတာ၊ သူ့ရုံးခန်းထဲခေါ်သွားပြီး သောက်ရမဲ့ ဆေးတွေ ကျမကို ပေးပြီးရှင်းပြပါတယ်။ “ ဟေ့ဒါနဲ့ နင့်ဘဲကြီးက ဘာဂျာသန်လားဟဲ့” “ ဘယ်သိမလဲ မနက်စောစောစီးစီးတော့ ထရက်တာပဲဟဲ့၊ ခစ်ခစ် အားနာလိုက်တာဟယ် မနေ့က ငါလည်း စားကောင်းကောင်းနဲ့ ငပိရည်နဲ့ ဒညှင်းသီး၊ မြှစ်ချဉ်၊ ကတက်ချဉ်တို့စရာတွေ စားထားမိတယ်၊ အဟီး” “ ကောင်မ အစားပုတ်။ နောက်ဆိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ဟ၊ ငါ့လည်း တခါဒူးရင်းသီးစားလိုက်ပြီး ညဖက် ကိုမောင်ငယ်လာရက်တော့ နံလို့တဲ့ ကွန်ပလိမ်းလုပ်နေတယ် ခစ်ခစ်” … အိမ်ပြန်ရောက်တော့ နောက်ကျနေပြီ၊ ကိုဘိုဘိုကြီးတောင် မန္တလေး ပြန်သွားပြီတဲ့။
မနက်ဖြန် သွားဖို့ တွက် ကျမ အဝတ်အစားတွေကို သေတ္တာတလုံးမှာ ပေါင်းထည့်၊ ဆေးလည်းမမေ့အောင်ထည့်။ လိုရမယ်ရ ဆောင်ထားတဲ့ ဂျယ်လေးဘာလေးထည့်၊ ပြီးတော့မှ တကိုယ်လုံးသွားလာထားတာ ငြီးစီစီ နဲ့မို့ ရေဝင်ချိုးလိုက်တယ်။ ရေချိုးခန်းထဲဝင်တော့ ကိုကိုညီတယောက် အိပ်ယာပေါ်ပက်လက်လှဲရင်း စာအုပ်တအုပ်ကို ဖတ်နေလေရဲ့။ ကျမရေချိုးပြီးပြန်ထွက်လာတော့ သံစုံတီးဝိုင်းတီးနေပြီလေ။ ကိုကိုညီတယောက်။ “ ခရော ခရော၊ ခူးခလူး၊ ဖရူးးဖွတ်ဖွတ်” စုံလိုက်တဲ့အသံ၊ တော်သေးတယ် မနေ့ကထည်းက ရှာထားတဲ့ ဂွမ်းကလေးနားထဲထည့်ပိတ်စို့ပြိးအိပ်ရတော့မှာပါပဲလေ။ ညဝတ်အင်္ကျီလဲပြီး နားထဲဂွမ်းစို့ အိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲလိုက်ပြီးတော့ အိပ်မလိုကျိုးစားပေမဲ့ တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်ဘူး။ ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက အပျိုပေါက်စ အရွယ် အတိတ်ဆီကို အတွေးတွေက ပျံ့လွင့်သွားပါတော့တယ်။
( ဒီနေရာက စပြီး တတိယလူ အနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ရေးပါရစေရှင်။ ဇတ်ကောင်များများကို ပိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှာမို့ပါ။ ) သက်ချိုပြုံးလေး သိတတ်တဲ့ အရွယ်ကထဲက ဒေါ်လေးမချိုနဲ့ အတူနေခဲ့ရသည်။ ဒေါ်လေး မချိုကလည်း ခလေးမရှိသူမို့ တူမလေးကို အရမ်းချစ်သည်။ သက်ချိုပြုံးကလေးကလည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက လုံးလုံးကလေး မျက်နှာချိုချို နှင့် ချစ်စရာလေး။ ဒေါ်လေးမချိုက ကျောင်းဆရာမ၊ သူ့ယောက်ျား ဦးဇော်အောင်က တရာ့ကိုးတရာ့တဆယ်။ ကားပွဲစား လိုလို၊ ချဲဒိုင်လိုလို၊ ယောင်ခြောက်ဆယ်ဖြစ်သည်။ ဆိုတော့ အိမ်မှာ ထမင်းချက်ဟင်းချက်၊ မိန်းမ အတွက် ထမင်းချိုင့်ထည့်ပေး၊ မိန်းမ ကို ကျောင်းလိုက်ပို့ပေး။ ထိုကဲ့သို့ တိုလီမှုတ်စ တွေ လုပ်ရင်းက ချဲလည်းရောင်းသည်။ နောက်လူကလည်း အရက်သောက်၊ ဆေးချ လိုက်သေးသည်။ ထိုကြောင့်မို့ မိန်းမ ကိုတော့ အသေကြောက်သည်။
သူလုပ်ချင်ရာလုပ်ရ ပြီးရော၊ မိန်းမဘာပြောပြော သည်းညီးခံသည်။ မိန်းမ တူမလေး သက်ချိုပြုံး ကိုးတန်းလောက်ကျတော့ ပေါင်လုံးတုတ်တုတ်လေး ၊ ခလေးအဆီမကုန်သေးသဖြင့် ခါးကလေးတုတ်နေသော်လည်း ရင်နှစ်မွှာက မောက်ဖြိုးဖြိုးလေး ဖြစ်လာတော့ မျက်စေ့ကျလာသည်။ ညဘက်ကျတော့ မိန်းမ မအိပ်ချင် မိန်းမ ကို နင်းနှိပ်ပေးပြီး တော့၊ သက်ချိုပြုံးကို ချောင်းတော့သည်။ သူတို့ မှာ နယ်အိမ်လေး ဆိုတော့ အိမ်က အိမ်ရှေ့ခန်း၊ အိပ်ခန်း နှင့် မီးဖိုချောင်၊ အခန်းသုံးခု တဆက်ထည်းရှိသည်။ တခန်းထည်းသောအိပ်ခန်းကို သူတို့ လင်မယားအိပ်ကြသည်။ သက်ချိုပြုံးကလေးက အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ အိပ်ရသည်။ မနက်ဆိုရင်တော့ ခြင်ထောင်ဖြုတ်၊ ဖျာလိပ်အခန်းထောင့်ထားလိုက်ရသည်။ မယား မချိုကို ခြေသလုံးလေး ဆုပ်နှယ် နှိပ်ပေး၊ ဇက်ကြောဆွဲပေးပြီ။ မချို အိပ်ပျော်သွားသည့်အချိန်မှာ သူအိမ်ရှေ့ ခန်းသို့ ခြေဖျားထောက်ထွက်လာတတ်သည်။ သက်ချိုပြုံး အိပ်သည့် စစ်ဇာခြင်ထောင်နားကို တိုးကပ်သွားကြည့်သည်။ ဇာခြင်ထောင်ထဲမှာက အိမ်နံရံ ဝါးထရံ အပေါက်ကြား တွေက ဝင်လာသည့် လမ်းမီးတိုင် အလင်းရောင်နှင့် မြင်နေရသော သက်ချိုပြုံး၏ ကိုယ်လုံးလေးကို တွေ့ရသည်။
သက်ချိုပြုံးကလည်း အအိပ်ကြမ်းသည်။ ညလည်ဆိုရင် ထမိန်က လည်ပင်းနားရောက်နေပြီ။ မီးရောင်အောက်မှာတောင် ဖွေးနေသော ပေါင်လုံးတုတ်တုတ်လေး များကို အသက်မရူပဲ မျက်လုံးကြီးပြူးး ကြည့်ရင်း ဦးဇော်အောင် တယောက် ဂွေလိမ့်တော့သည်။ နေ့တိုင်းကျတော့ လည်း ကြာတော့ ဒီထက်ပိုလိုချင်လာသည်။ သက်ချိုပြုံးလေး အသားကို ထိချင်လာသည်။ သွားကိုင်လိုက်လို့ နိုးသွားပြီးထအော်လျှင် မိန်းမနှင့်ပြဿ နာတက်မှာလည်း ကြောက်မိသည်။ မိန်းမ အိမ်ပေါ်က နှင်ချလိုက်လျှင်၊ ဘယ်သွားနေပြီး ဘာနဲ့စားရမလည်း သူမသိတော့ ကြောက်သည်။ သို့ပေမဲ့ တရက် နှာက တအားထန်လာတော့ ခြင်ထောင်စကို လှန် လက်လျိုထည့်ပြီး သက်ချိုပြုံးလေး ခြေသလုံးကို လက်ဝါးလေးဖြင့်ပွတ်မိသည်။ တချက်နှစ်ချက်သာ ပွတ်ရသေးသည်၊ သူ့ လရေတွေ ပုဆိုးထည်း တဖြုန်းဖြုန်း ထွက်ကုန်သဖြင့် ပုဆိုးကို ညကြီးမင်းကြီး သွားလဲ လိုက်ရသည်။
နောက်နေ့ကျတော့ နည်းနည်းထိန်းနိုင်သွားသလို လူကလည်း ပိုရဲလာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ပေါင်ရင်းနားအရောက်တွင် ထွက်သွားပြန်သဖြင့် ပုဆိုးလဲလိုက်ရပြန်သည်။ နောက်နေ့တွေကျတော့ နေ့တိုင်းပုဆိုးလဲ လို့ကလည်း မဖြစ်နိုင်။ တော်ကြာ မိန်းမက မသင်္ကာ ဖြစ်မည်စိုးသဖြင့်။ သက်ချိုပြုံး ခြင်ထောင်ဘေး မှာ သွားနိုက်ဖို့ကြံလျှင် သတင်းစာ စက္ကူ ယူသွားရတော့သည်။ သူ့ကောင်ကြီးအောက်မှာ သတင်းစာစက္ကူခံထားပြီး ၊ သွားကိုင်ရသည်။ အဲလို သွားသွားလုပ်နေရင်းက သူမသင်္ကာတော့၊ သူသွားကြည့်တိုင်း ထမိန်က ကွင်းလိုက်ခါးမှာ ရောက်နေသည်။ နောက် သူခြေသလုံးကို စပွတ်လျှင် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပေါင်ကို ကားပေးလာသည်။ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေး မှာတော့ အရိပ်ကျနေသဖြင့် ဘာအရောင်မှန်းတောင်မသိ။ နောက်ဆုံးတော့ အတွင်းခံလေးပေါ်ကနေ ပိပိလေးကို စပြီး ပွတ်သည့်အဆင့်ရောက်လာသည်။ သူ့လက်ချောင်းထိတ်တွေက စိုတိုတို ချွဲတဲတဲ အရေလေးတွေ ပင်တီပေါ်က စမ်းမိလာသည်။
မိသက်လေး အိပ်ပျော်နေရင်းကအိပ်မက် ထဲမှာများ ဘဲနဲ့ တွေ့နေတလား။ ပင်တီလေးက ပျော့ပျော့လေး ဆိုတော့ အကွဲကြောင်းနေရာလေးကို စမ်းလို့ရသည်၊ သူလက်ထိပ်ကလေးနှင့် အသာဆွဲကြည့်ရာ သက်ချိုပြုံးလေး ကိုယ်လုံး တချက်တုန်ကနဲ ဖြစ်သွားတာ တွေ့ရသည်။ သူနိုးနေပြီး အိပ်ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာနေမှာပါဟု ဦးဇော်အောင် စပြီး တွေး မိလာသည်။ သူတို့ နှစ်ယောက် ရဲ့ ဂိမ်းက ပိုပြီးအရှိန်မြင့်တက်လာသည်။ ဦးဇော်အောင် အပေါ်ပိုင်းကို စရန်ရှာလာသည်။ သက်ချိုပြုံးကလေးကလည်း ချွတ်လို့လွယ်တာ လှန်လို့လွယ်တာတွေ ဝတ်လာခဲ့သည်။ ဦးဇော်အောင် လုပ်ချင်ရာ လုပ် မနိုး။ ဦးဇော်အောင်ကလည်း ညရောက်ပြီ ဆိုရင် မိန်းမ ကို အမြန်နင်းနှိပ်ပေးပြီ။ အိပ်ပျော်တာနှင့် သက်ချိုပြုံး ခြင်ထောင်ဘေး လစ်တော့သည်။ အခု တော့ သက်ချိုပြုံး ချိုချိုလေး တွေကို စစုပ်လို့ရနေပြီ။ သူ့စို့တဲ့ အချိန် သက်ချိုပြုံးလေး တအင်းအင်း ညီးသံကြားရသည်။
မျက်လုံးတော့ မဖွင့်။ ဦးဇော်အောင်က လည်း သံယောဇဉ် ရှိသူမို့ တအားတော့ မစို့၊ တော်ကြာ ပုံပျက်တာတို့၊ လက်ယောင်လိုက်တာတို့ ဖြစ်နေမှာလည်းစိုးသည်။ ကိုယ့်တူမလေးကို လည်း လင်ကောင်းသားကောင်းရစေချင်သေးသည်။ တနေ့ မိန်းမက ဘယ်က ဘယ်လိုဆန္ဒရှိလာသလဲ မသိ။ သူနှိပ်ပေးနေတုန်းမှာပဲ သူ့လက်ကို ဆွဲ၍ ကိုယ်ပေါ်တက်စေသဖြင့် ဦးဇော်အောင် တယောက် မိန်းမ အလိုဖြည့်ပေးရသည်။ ပြီးသွားတော့လည်း မောမောနှင့် အိပ်ပျော်သွားရာ အဲဒီညက သက်ချိုပြုါံ် ဆီ မရောက်ဖြစ်လိုက်တော့။ နောက်နေ့ည ရောက်သွားတော့ သက်ချိုပြုံးလေး က ခါတိုင်းလို လန်မနေတော့ ၊ အဝတ်အစားတွေ လုံလုံခြုံခြုံနှင့် ဖြစ်နေသည်။ ဦးဇော်အောင် အတင်း ကျိုးစားသော်လည်း မရ၊ အတင်းဖိထားသည်။ သိပ်လည်းမကြမ်းရဲ တော်ကြာ ထအော်နေမှ ဒုက္ခ ဆိုပြီး ကိုယ့်အိပ်ယာ ကိုယ်ပြန်လာရသည်။ နောက်နေ့ကျတော့လည်း ထိုအတိုင်းပဲ၊ ဦးဇော်မနေနိုင်တော့၊ ခြင်ထောင်ထဲ ဝင်ပြီး သက်ချိုပြုံးလေး နူတ်ခမ်းကို သူ့နူတ်ခမ်းနှင့်ဖိကပ်ပြီး စုပ်မိလေတော့သည်။ ပထမတော့ ခေါင်းကို ခါယမ်းသေးသော်လည်း နောက်တော့ အရှိန်လျှော့သွားသည်။သို့ပေမဲ့ မျက်စေ့တော့ မဖွင့်၊ ဦးဇော်အောင် လျှာကြီးကို သူ့လျှာလေးနှင့် ပြန်ထိုးလာသည်။
ထိုနေ့မှ စ၍ ဦးဇော်အောင်က သူ့တကိုယ်လုံးကို ခြင်ထောင်ထဲ ဝင်ပြီး သက်ချိုပြုံးကလေး ဘေးမှာ လှဲလျှက်၊ နူတ်ခမ်းတွေစုပ်သည်၊ နို့စို့သည်။ ပေါင်ခွကြားမှာ မျက်နှာအပ်ပြီး ပိပိလေးကို ရက်သည်။ ပထမတော့ ပင်တီပေါ်က။ နောက်တော့ ပင်တီကို ချွတ်ပြီးတော့။ သို့ပေမဲ့ ဘာလို့လည်းတော့ မသိ။ ဦးဇော်အောင် က သူ့ညီတော်မောင်ဖြင့်တော့ ရန်မရှာ။ သူ့လက်ကို သာ သူသုံးပြီး စိတ်ဆန္ဒဖြေရှာသည်။ မတော်တဆ ဗိုက်ကြီးသွားမှာလည်းကြောက်သည်။ နောက်တခုက သက်ချိုပြုံးလေးကို ချစ်တော့ လင်ကောင်းသားကောင်းရစေချင်သည်။ သူ့ကြောင့် အပျိုစင်ပန်းလေးနွမ်းသွားမှာကို လည်း စိုးရိမ်မိသည်။ နှာအတော်ထန်လာသော အချိန်မှာ အိပ်ပျော်နေသော သို့မဟုတ် အိပ်ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်နေသော၊ သက်ချိုပြုါံ်း၏ လက်ကလေးကို ကိုင်ပြီး သူ့ ညီတော်မောင်ကို ကိုင်ထားစေသည်။ အိပ်ပျော်နေသော သက်ချိုပြုံး ကသူ့ညီတော်မောင်ကို တင်းတင်းလေး ဆုပ်ထားလျှင် သူ့ဖင်ကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ရင်း သက်ချိုပြုံးလက်ထဲမှာ ပြီးရသည်။ နောက်တော့ တဆင့်တက်လာသည်။ သူ့လိင်တန်ကြီးကို အုန်းဆီသုတ်ပြီး သက်ချိုပြုံး၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ ညှပ်ပြိး လုပ်သည်။
အဲဒါကမှ တဆင့် သက်ချိုပြုံး ၏ နူတ်ခမ်းလေးကို သူ့ကောင်ကြီးဖြင့် ထိုးကြည့်သည်။ ပါးစပ်လေး ဖွင့်လာတော့ အသာလေး ထိုးထည့်ပေးသည်။ သက်ချိုပြုံးက အိပ်ပျော်နေရာမှ သူ့ကောင်ကြီးကို သကြားလုံးလေး ငုံစုပ်နေသလိုစုပ်ပေးသည်။ နောက်တော့ သူက သူ့ညီတော်မောင်ကို သက်ချိုပြုံးပါးစပ်ထဲထည့်ထားပြီး သူ့မျက်နှာကို သက်ချိုပြုံးပေါင် နှစ်လုံးကြားထည့်ကာ ပိပိလေးကို ရက်သည်။ သူတို့ နှစ်ယောက် ဆစ်စတီနိုင်းကို လုပ်ဖြစ်လာကြသည်။ စကားတော့ တလုံးမှ မပြောဖြစ်ကြ။ နေ့လည်ဘက်ကျရင်လည်း တယောက်နှင့်တယောက် ညတုန်းက ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သလိုပင်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး သက်ချိုပြုံးလေး ရန်ကုန်ကို ကျောင်းသွားတက်တော့မှ အဲဒီဇာတ်လမ်းပြတ်သွားတော့သည်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဦးဇော်အောင်က သူဆေးဝယ်နေကြ ဆိုင်မှ ကုလားမလေး နှင့် ညိနေလေပြီ။ သက်ချိုပြုံး ကျောင်းပိတ်ရက်ပြန်လာတော့ ဦးဇော်အောင်က ကုလားမဝတုတ်မလေးကို စွဲနေလေပြီဖြစ်ရာ သက်ချိုပြုံးဆီကို မလာတော့။ ထိုအချိန်မှာတော့ သက်ချိုပြုံးလည်း အရွယ်လေး ရနေပြီဖြစ်ရာ။
ဒေါ်လေးမချို စိတ်ငြိုညင်သွားမှာလည်းကြောက်သည်မို့။ ဦးဇော်အောင်ကို တိတ်တခိုးတမ်းတမိတာက လွဲလို့ ဒီထက်ပိုပြီး ရေလာမြောင်းပေး မလုပ်လိုတော့။ နောက်တခုက သူ့ကို ချစ်ရေးဆို၊ လူပျိုလှည့်နေသည့် မြို့သား ၊မော်ဒယ် မောင်မောင်သက် ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားနေမိတာက လည်း ဦးဇော်အောင်နှင့် ဇာတ်လမ်းပြန်မဆက်ဖြစ်သည့် အကြောင်း တကြောင်းဖြစ်လေတော့သည်။ မော်ဒယ်မောင်မောင်သက်က တော့ ကားလေး တစီးလည်းရှိသည်။ သူက မိန်းမ တွေကို ချူစားသည်ဟု နာမည်ကြီးနေသည်။ သို့သော်လည်း သက်ချိုပြုံးကိုတော့ တကယ်ကြိုက်တာပါဟု သူက ဆိုသည်။ သက်ချိုပြုံးလည်း ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပါလေ ဟု တွေးနေမိပြီဖြစ်သည်။ တနေ့ ကျောင်းမှ အဆောင်ပြန်လာသော သက်ချိုပြုံးကို အဆောင်လော်ဘီမှာ ထိုင်စောင့်နေသော မောင်မောင်သက် ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “မ နဲ့ အရေးကြီးတဲ့ စကားပြောစရာရှိလို့ပါ” ဟုပြောလာသည်။
သူနဲ့ ခနလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သည်။ ခါတိုင်းလည်း သူ့ကားနှင့် တခုခု သွားစားနေကြ ဆိုတော့ သက်ချိုပြုံးလည်း အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဖြစ် လိုက်သွားလိုက်မိတော့သည်။ မောင်မောင်သက်၏ မော်ဒယ်လုပ်စားသည့်နာမည်မှာ၊ “စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို” ဖြစ်လေသည်။ ရင်းနီးသူများက အိမ်နာမည်အလွယ် မောင်မောင်သက် ဟုသာ ခေါ်ကြလေသည်။ “ ကိုကိုသက် ဒါက ဘယ်လိုနေရာကြီးလည်းဟင် “ “ အဲဒါ ချစ်သူလမ်းကြားလို့ခေါ်တယ်ကွယ့် အသက်ရဲ့၊ ချစ်သူသမီးရီးစားတွေ လာလာ ပြီး ချစ်တင်းနှောကြတဲ့ နေရာပေါ့ကွယ်” “ဟင်း နော် ဘာချစ်တင်းနှောတာလဲ မီးက ဘာမှ သိတာမဟုတ်ဘူးနော်၊ လူကို လာပြီးလူလည်မကျနဲ့” “ မကျပါဘူးကွာ ကို က သက်ကို ချစ်လို့ပါ” “ ခစ်ခစ် ဘာချစ်တာလည်း၊ သူနော် လက်မသရမ်းနဲ့” စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို က ကားကို လူပြတ်သော လမ်းဘေးတနေရာမှာ ထိုးရပ်လိုက်သဖြင့် သက်ချိုပြုံးက မေးနေခြင်းဖြစ်လေသည်။ နောက်တော့ မောင်မောင်သက် ၏ လက်တွေက သူ့ရင်ဘတ်ကို လာဆုပ်ကိုင်သဖြင့် တွန်းလွှတ်လိုက်ရင်း ပြောနေတာ ဖြစ်လေသည်။
တကယ်က သက်ချိုပြုံး ရဲ့ အသွေးအသားတွေကလည်း တောင်းတ နေပြီ ဖြစ်လေသည်။ ဦးဇော်အောင် နှင့် အိပ်ချင်ယောင်ဆောင် ပြီး ခံခဲ့ရသည့် အရသာကောင်းကောင်းလေး မျိုးက မရတာ ကြာလှပြီလေ။ သို့သော်လည်း ဦးဇော်အောင်က အဆုံစွန်ထိ မသွားခဲ့။ ဘာလို့မှန်းမသိ။ ဦးဇော် နှင့်သူနှင့်က ဖွင့်မပြောကြသော နားလည်မှုတွေနဲ့ မဟုတ်လား။ သူက ပေးချင်ပေမဲ့ ဦးဇော်က မယူခဲ့၊ တကယ်က ဦးဇော် ကိုလည်းသူကပင် လမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ သူအပျိုပေါက်ဖြစ်လာပြီး ဆန့်ကျင်ဖက်လိင် ကို စစိတ်ဝင်စား လာသည့်အချိန်မှာ တအိမ်ထဲနေ၊ သွေးသား မတော်စပ်သူ ဦးဇော် နှင့် အမှတ်မထင် အထိအတွေ့တွေမှာ သာယာလာမိသည်။ ဒေါ်လေး မချိုနှင့် ဦးဇော်တို့ အလုပ်ဖြစ်ကြတာကိုလည်း သူဝါးထရံကြား ကချောင်းကြည့်လို့ မြင် ဘူးနေပြီ။ ဒေါ်လေးမချို အိပ်မပျော်ခင် နင်းနှိပ်ပေးနေရသော ဦးဇော်ကိုလည်း သနားမိသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဦးဇော်ရှေ့မှာ မမြင်မြင်အောင် ကိုယ့်ရဲ့ စို့စို့ပို့ပို့လေး ထွက်လာသော အသားစိုင် လေးတွေကို လှုပ်ခါပြမိသည်။ ကြာတော့ လည်း ဦးဇော်သတိထားမိလာသည်။ ဦးဇော် သူ့ခြင်ထောင်ဘေး လာချောင်းနေတာကို သူက အစထဲက သိနေသည်။
သူက ဦးဇော်နှင့် ဒေါ်လေးမချို အလုပ်ဖြစ်မလားဟု ဝါးထရံကြားက ချောင်းနေတာမို့ ဒေါ်လေး မချို အိပ်ပျော်သွားတော့ ဦးဇော် အခန်းပြင်ထွက်လာတာနှင့် သူက အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်သည်။ မှေးထားသည့် သူ့မျက်လုံးက ဦးဇော်ကို မြင်နေရသည်။ နောက်နေ့တွေမှာ သူ ထမိန်ကို သူ့အလိုလို လန်နေသည့်ပုံဖြစ်အောင် လှန်ထားလိုက်သည်။ အဲလိုနှင့် အဆင့်တွေ တဖြည်းဖြည်းတက်လာ ခဲ့ကြရသည်။ ယခုလည်း စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို က သူ့ကို ဂွင်ဖန်ပြီး ရိုက်တော့မည်မှန်းသူသိသည်။ သို့သော်လည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ခြင်းထဲက ကြက်ကလေးလိုနေလိုက်သည်။ စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို ခေါ် မောင်မောင်သက်က လည်း လူကသာ ဆင်လိုလို ကျားလိုလို လုပ်နေသည်၊ ကြည့်ရတာ မိန်းမ အတွေ့အကြုံရော ရှိရဲ့လားမသိ၊ ခုတောင် သက်ချိုပြုံး၏ ရင်သားတွေကို လာကိုင်တာက နုနုရွရွ၊ ရိုမန်းတစ်မရှိ။ လမ်းဘေး မှာ သရက်သီးဝယ်တော့ ဗန်းထဲက သရက်သီးတွေကို တလုံးချင်းလိုက်ကိုင်ကြည့်နေသလိုမျိုးလုပ် နေသည်။
တခုတော်သေးသည်က ဖရဲသီး ဝယ်သလို တဘုတ်ဘုတ် လက်ဝါးဖြင့် ရိုက်မကြည့်တာက တော်သေး သည်ခေါ်ရမည်။ သက်ချိုပြုံးက နဂိုထဲက ဒီဂွင်လာမည်ကို ကြိုသိထားသဖြင့် ချွတ်လို့လွယ်မည့် ဘရာဇီယာ ဂျိတ်ရှေ့ဖက်တပ်သော အမျိုးအစား ဝတ်လာပြီး စကဒ်အတို ပေါင်လည်လောက် လေးလည်း ဝတ်လာခဲ့လို့သာ တော်တော့သည်၊ နို့မို့ဆိုရင် မောင်မင်းကြီးသား မျက်မမြင်ပုဏ္ဍား ဆင်စမ်းသလိုပင် ဖြစ်နေတော့မည်။ သက်ချိုပြုံးက မသိသလို ငြင်းသလို မူရင်း နွဲ့ရင်းဖြင့် ကိုယ့်ဘာသာ ချွတ်ပေးလိုက်လို့သာ နို့ကြီးတွေကို သူကိုင်နေရခြင်းဖြစ်လေသည်။ နို့မို့ ဘရာဇီယာဂျိတ်ရှာရင်း မိုးလင်းသွားမည့်သဘောမှာ ရှိသည်။ နောက်တော့လည်း သက်ချိုပြုံးရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကို အငမ်းမရ အားရပါးရ အမေနို့ ကို ခလေးစို့နေသလို အားရပါးရစို့နေလေသည်။ သူ့နို့တွေကို အားရပါးရ မောင်မောင်သက် တယောက် မပျင်းနိုင် စို့နေသောလည်း အောက်မှာ ရွှဲနေပြီ ဖြစ်သော သက်ချိုပြုံးတယောက်ကတော့ အားမရတော့၊ မောင်မောင်သက် ၏ မိုဟော့ ဆံပင်ကို ဆွဲကိုင်ကာ သူ့ပေါင်ကြားကပ်ပေးလိုက်သည်။
မောင်မောင်သက်တယောက် သက်ချိုပြုံး၏ ပင်တီ ဘယ်တုန်းက ကျွတ်သွား တာလည်းဆိုတာတောင် စဉ်းစားချိန်မရလိုက်၊ အမွှေးထူထူ အရည်ရွဲရွဲ ဖားဂုံညှင်းလေး မှာ မျက်နှာအပ်နေခြေပြီ။ အဲနေရာရောက်တော့လည်း ခွေးထန်းလျှက်ရသလို တပြတ်ပြတ်မြည်အောင်ရက်နေပြန် ပါသည်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ပိပိလေးကို လျှာစိုစို နှင့်လာရက်တော့လည်း ဘယ်သူမဆို အရသာ တွေ့တာပဲ မဟုတ်လား၊ ဟိုစာအုပ်တအုပ်မှာဆိုရင် မိုင်လိုဆိုတဲ့ ခွေးကြီး ရက်တာတောင် ခံသေးတယ် လို့ရေးထားတာ ဖတ်ဘူးတာပဲ၊ ခစ်ခစ်။ မောင်မောင်သက် က မိုင်လိုထက်မသာရင်တောင်မှ ရောဂါတွေ ဘာတွေတော့ ကင်းမှာပါလေ လို့ပဲ တွေးမိတယ်။ အဲဒီ ကောင်ကလည်း ပေါင်ကြားထဲထည့်လိုက်တော့လည်း မပြီးနိုင်အောင် တပြတ်ပြတ်ရက်နေတော့တာပဲ။ ပထမက ခံလို့ကောင်းပေမဲ့ တမျိုးထည်းကြီးထပ်တလဲလဲ ကျတော့လည်း ပျင်းတာပဲလေ။ အဲဒါနဲ့သူ့ကိုယ်ကို ဆွဲမ ပြီး သူဘောင်းဘီကို ဇစ်ဖြုတ်ဖို့ ကျိုးစားရတော့တာပေါ့။ ဟိုက်။ သက်ချိုပြုံး ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားသည်။
သူတွေ့ကြုံဖူးတာက ဦးဇော်တယောက်ထည်း။ ဦးဇော်က သူ့အချစ်ဦး ဆိုလည်းဟုတ်တယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး သင်ဆရာမြင်ဆရာဆိုလည်းဟုတ်တယ်။ ဦးဇော်ရဲ့ ပစ္စည်းက ငါးလက်မ ကျော်ကျော်လောက် ရှိပြီး မာကြောနေတတ်သဖြင့် သီးမွှေး ငှက်ပြောသီးလိုဖြစ်နေသည်။ ယောက်ျားတွေ အားလုံးက အဲလိုမျိုးပဲဟု သက်ချိုပြုံးက ထင်နေခဲ့သည်။ ယခု မောင်မောင်သက် ရဲ့ ယောက်ျားအင်္ဂါကို တွေ့လိုက်တော့ မောင်မောင်သက် အသက်မှ ပြည့်သေးရဲ့လားဟု ပင် အတွေးဝင်မိသည်။ ဂျိုးကလေးက သေးသေးလေး နှင့် ပျော့နေသေးသည်။ ဝက်ဖြစ်မှတော့ မစင်ကြောက်နေလို့ ( စကားပုံဖြစ်ပါသည်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝက်ဖြင့်နိုင်းခြင်းမဟုတ်သလို မောင်မောင်သက်ပစ္စည်းကိုလည်းမစင်လို့နိူင်းခြင်းမဟုတ်ပါ ) တော့ မထူးတော့ဘူး ဆိုပြီး သူ့နူတ်ခမ်းလေး ဖြင့် ငုံစုပ်ပေးလိုက်သည်။ “ အား ခစ်ခစ် ယားတယ် သက်ရဲ့ အိ” စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို တယောက် ခါးလေး လိမ်ကာ တခစ်ခစ် ရီရှာသည်။ နောက်တော့ ဖီးရသွားကာ မရီနိုင်တော့၊ အတွေ့အကြုံရှိပုံမရ ဆိုတာ သက်ချိုပြုံးကောင်းကောင်းသိလိုက်သည်။
သူမှုတ်ပေးစုပ်ပေးလိုက်တော့မှ စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို ၏ ညီတော်မောင်က ရခိုင်ငှက်ပြောသီးလေးလို မာလာသည်။ ဒါတောင် သူ့နူတ်ခမ်းက ဆီးခုံထိနေပြီ လထိတ်လေးက အာဂေါင်ကိုပင်လာမထိ။အာမထိ လျှာမထိဆိုတဲ့စကားအဲလိုကနေလာတာလားမသိ။ ပြန်ပျော့မသွားခင် တော့ သူတခုခု လုပ်မှ ရမည်ဟု တွေးပြီး သက်ချိုပြုံးက စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို ပေါ်ကို ခွထိုင်လိုက်သည်။ “ အား အိ သေပါပြီ အားလေးတယ် သက်ရဲ့” သက်ချိုပြုံးက စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို ၏ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ခွကာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးမှ စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို ၏ ရခိုင်ငှက်ပျော်သီး လေးကို လက်ညိုးလက်မနှင့် ညှပ်ကိုင်ကာ သူ့ပိပိ အဝတွင်တေ့လိုက်သည်။ သူ့မှာ အတွေ့အကြုံမရှိသော်လည်း ဒီလောက်လေးနဲ့တော့ သူဘာမှ မဖြစ်နိုင်ဟု တွေးကာ သက်ချိုပြုံး တယောက် ထိုင်ချပြစ်လိုက်သည်။ သက်ချိုပြုံးလေးငါးဆယ်ချက်လောက် ထိုင်ထလုပ်လိုက်တော့ စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို ၏ ရခိုင်လေးက ပြစ်ပြစ်နှင့် အရည်တွေ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။
သက်ချိုပြုံးလည်း တော်တော်စိတ်ညစ်သွားရသည်။ ငါ့ဘာသာ သူငယ်ချင်းမေသူဟွား ပြောသလို နူတ်ခမ်းနီတောင့်ကို ကွန်ဒန်စွတ်ပြီး လုပ်တာက ပိုအရသာရှိအုန်းမည်ဟု လည်းတွေးလိုက်မိသည်။ ခုမှတော့ မတတ်နိုင်တော့ ဆက်ဆောင့်လို့လည်းမရပြီ နဂိုထဲက ရခိုင်ငှက်ပျောသီးလေး ကို မာအောင်မနည်းလုပ်ပေးထားရသည်။ ယခုတော့ လက်မလောက်ပဲကျန်တော့သည်။ သက်ချိုပြုံးစိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် ကားတံခါးဖွင့်ကာ လမ်းဘေးထွက်ပြီး သေးထိုင်ပေါက်သလို ဟန်ပြပြီး တန်းလန်းဖြစ်နေသော ဖီးကို အဆုံးစွန်ရောက်သွားအောင် ကိုယ့်လက်နှင့်ကိုယ်လက်စသတ်နေရသည်။ ထိုအချိန်မှာ ကားထဲမှာ ဖုံးမြည်သံကြားပြီး စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို တယောက်ဖုံးပြောသံကြားနေရသည်။ “ ဟုတ် ကျနော်ဖိုးသက်ပါ၊ အန်ကယ်ရဲ။ ဟုတ်။ ဒေါ်လေးဖုံးကို ကျနော် ဒီညခနငှားလာလို့” “…….” “ဟုတ် ဒေါ်လေး ရှိမယ် သူ့အခန်းမှာပဲတဲ့၊ အန်ကယ်ရဲခေါ်ရင်ပြောလိုက်ပါတဲ့ မှာထားတယ်” “……” “ဟုတ် အဆင်ပြေပါတယ် အန်ကယ်ရဲ၊ ကျနော်ဖွတ်ဆီလိမ်းသွားတယ်လေ” “……” “ ဟုတ်.. အစတော့ နည်းနည်းကျပ်တယ်လေ၊ဟဲဟဲ။
နောက်တော့ အဆင်ပြေသွာပါတယ်” “……” “ အာအဲဒါတော့ မရလောက်သေးဘူးထင်တယ်၊ ကျနော်က အခုမှပါကင်ဖွင့်ပစ်လိုက်တာလေ၊ ကောင်မလေးက သွေးတွေဘာတွေထွက်ပြီး တအားကြောက်နေလို့ အဆုံးထိတောင်မလုပ်ရဲဘူး၊ အနောက်ကတော့ ဘယ်ရအုန်းမလဲ၊ “ “…….” “ ဟုတ်.. အန်ကယ်ရဲ။ နောက်တခါယူသွားမယ်လေအန်ကယ်ရဲ ပြောတဲ့ ဂျယ်” “…… “ အင်း ဘယ်မှာ.. ဒေါ်လေး အိပ်ယာဘေးက အံဆွဲထဲမှာ .. “ “….” “ ဟုတ်.. ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် နောက်တခါဆိုယူသွားလိုက်မယ်” “……” “ ဘာ ..အော်.. အင်းးး… အန်ကယ်ရဲ မလာတဲ့ ရက်မှ ယူသွာပါ့မယ်” “…..” “ အိုကေ ကျေးဇူး ပဲ ဘိုင်ဘိုင်” သက်ချိုပြုံးလည်း စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို ဖုံးထဲ ဘာတွေ ပြောမှန်းမသိသော်လည်း ကိုယ့်လက်နှင့် ကိုယ်အာသာဖြေတာ ဖီလင် အဆုံးစွန်ရောက်သွားသဖြင့်၊ ထိုနေရာမှာပင် ရှုရှုးပေါက်ချခဲ့ပြီး ကားပေါ်ပြန်တက်လာခဲ့တော့သည်။
သုတ်စရာ တစ်ရှုးလည်းမပါသဖြင့် စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို ပဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ရက်ခိုင်းရင်ကောင်းမလား စဉ်းစာလိုက်မိသေးသည်။ သို့သော်လည်း စိုင်းငယ်ချမ်းအေးသက်ကိုကို က သူကားထဲ ဝင်လာတာနှင့် စက်ကောက်နိုးနေပြီမို့ ဘာမှ မပြောတော့ ပဲ ကိုယ့်အဝတ်အစားများကို သပ်သပ်ယပ်ယပ်ဖြစ်အောင်သာ ပြုပြင်ပြီး အဆောင်ရှိရာသို့ ပြန်လိုက်လာခဲ့လေတော့သည်။ ဒေါက်တာမေဟွား တယောက် ဆေးခန်းပိတ်ရင်းနဲ့ မှ သူ့စားပွဲပေါ်က အထုပ်တထုပ်ကို သတိထားမိလေသည်။ ဟယ် ဟိုကောင်မ ပြာပြာ ပြာပြာ နဲ့ ဆေးတထုပ်မေ့ကျန်ခဲ့ပြီ ဆိုတာသိလိုက် သည်။ သှူုသူငယ်ချင်း သက်ချိုပြုံးတယောက် ဟားနီမွမ်း မသွားခင် ဆေးလိုအပ်တာတွေ လာတောင်း လို့၊ ပေးလိုက်ရသည်။ သူ့အတွက် ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေ ချောဆီတွေ အဲဒါတွေ အပြင်၊ သူ့ယောက်ျား ကြည့်ရတာ ခနလေးခနလေး ပြီးမဲ့သဘောနဲ့ ပြန်တောင်ဖို့လည်း ကြာမဲ့ သဘောမှာရှိတော့ ဗာရာဂလာ လိုဆေးမျိုလေးများ ရှိရင် ပေးဖို့ ပြောသဖြင့်၊ မေဟွားကိုယ်တိုင်တောင် မင်္ဂလာဦးည ကိုမောင်ငယ်သုံးဖို့ဆိုပြီး ဝယ်ထားသည့် ဗာရာ၈လာထဲမှ တချို့ခွဲပေးလိုက်ရသည်၊ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီဆေးဗူးက မှ ကျန်သွားခဲ့ရသည်။
အင်း သူတို့ မနက်ဖြန် မှ သွားမှာ ဆိုတော့ ဒီည လိုက်ပေးလိုက်ရင် မှီနိုင်သေးတယ်၊ အင်းလေ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကောင်းဖို့ပဲ မတတ်နိုင်ဘူး၊ ဟု ဆိုတာ တက်ကစီ တစီးလှမ်းတား၍ သက်ချိုပြုံးယောက်ျား အိမ်သို့ သွားရှာလေသည်။ မေဟွား သက်ချိုပြုံးတို့ တိုက်ခန်းရှေ့ရောက်ပြီး တက္ကစီပေါ်က ဆင်းလာတော့ သူ့အနောက်နား ကားတစီးလာရပ်တာကို သတိထားမိလိုက်သည်။ ထိုကားထဲမှ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း နူတ်ခမ်းမွှေးကားကားနှင့် လူကြီးတယောက်ဆင်းလာတာ တွေ့လိုက်ရသော်လည်း အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ပင်၊ သက်ချိုပြုံးတို့ အထပ်ကို တက်လာခဲ့လိုက်လေသည်။ သူ့နောက်ဘက်မှ လှေခါးကိုတက်လိုက်လာသံ ကြားသဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ အခုနက ကားမောင်းလာသော လူကြီးဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရသည်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ခန့်ခန့်ချောချောကြီးပဲ လို့ တွေးလိုက်မိသည်။ သို့သော်လည်း သူလှည့်ကြည့်လိုက် ချိန်မှာ ထိုလူကြီး၏ မျက်လုံးအစုံက သူ့ တင်ပါး တွေကို စူးစိုက်ကြည့်နေတာ မြင်လိုက်ရတော့ ကြည်သည်းမွှေးညှင်း ထသွားရ၏၊ ဟယ် လူလည်းမရှိ ဒီလှေခါးထဲမှာ ဒုက္ခပဲ ဟု တွေးကာ လန့်လာ၏။
ထို့နှင့် သုတ်သုတ် သုတ်သုတ် အမြန်တက်ကာ သက်ချိုပြုံး နေသည့် အခန်းဝမှာ ဘဲကို အဆက်မပြတ်နိပ်မိနေလေသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ထိုလူကြီးမှာ သူ့နောက်နားရောက်လာပြီး။ “ အော် ငါ့တူမကြီးက သားညီ ဆီ လာလည်တာလား “ “ ဟုတ် ဟုတ် မိသက် က ကျနော့်သူငယ်ချင်းပါ” “ အင်း ဒီခေတ်မိန်းခလေးတွေကလည်း ကျနော် တို့ ဗျ တို့တယ်သုံးကြတာပဲ၊ မိန်းခလေးကြည့်ရတာ ဖြတ်ဖေါက်ချူပ်နဲ့လည်းမတူပါဘူး အဟီးးး” သူ့တင်ပါး လုံးလုံးလေးများကို မျက်လုံးမလွဲပဲ ကြည့်ကာ ပြောနေရင်းက သူ့စကားသူသဘောကျသလို ဟီးကနဲ ရီလိုက်သော ထိုလူကြီးကြောင့် မေသူဟွား တယောက် ရင်တွေ ဖင်တွေ တုန်သွား၏၊ သက်ချိုပြုံးတို့ အခန်းကလည်း ဘာမှ လှုပ်ရှားသံမပြု သဖြင့် တယောက်မှ မရှိကြဘူးထင်တယ်ဟုတွေးမိလေသည်။
ထိုလူကြီးကလည်း သူ့နားမှ မခွာသေးဘဲ၊ “ အင်း သူတို့ အပြင်သွားကြတယ်ထင်တယ်ကွဲ့ ငါတူမကြီးက ဘယ်သူလည်း ဦးပြောထားလိုက်မယ်လေ သူတို့ပြန်လာရင်” “ ရပါတယ် ဦးရီး ကျနော်က သူ့အတွက် ဆေးယူလာတာပါ မနက်ဖြန်သူတို့ ခရီးထွက်ရင် မှီအောင်” “ ဟေ အဲဒါဆိုရင်လည်း သူ့ယောက်ခမ ကြီးအပေါ်ထပ်မှာပဲနေတာကို ပေးထားလိုက်ပါလား သူတို့ ပေးပေးမှာပေါ့” “ အင်း” မေသူဟွားတယောက် ထိုလူကြီးရှေ့မှ လှေခါးအပေါ်ထပ်သို့ ဆက်တက်ရမည်ကို လန့်နေ၏။ ထိုလူကြီးမျက်လုံးတွေက သူ့ ထမိန် သား အိအိလေးများကို ပင်ထိုးဖေါက်မြင်နေသလိုပင်။သို့ပေမဲ့ ရောက်ပြီးမှ တော့ မထူးတော့ ဆိုကာ၊ စိတ်ကို တင်းပြီး လှေခါးထစ်ကို စတက်လိုက်လေသည်။ သူထင်သည့်အတိုင်းပင် ထိုလူကြီးက အနောက်မှ ကပ်ပါလာလေသည်။ အပေါ်ထပ်က ကိုညီ့ အဖေ တို့ အခန်းဝရောက်၍ ဘဲတီးလိုက်တော့ ခနအကြာမှာ တံခါးပွင့်လာလေသည်။ ကိုညီံ အဖေ ဦးရဲထောင်က မေသူဟွားကို မြင်တော့ သူ့အသိလားဟု စဉ်းစားနေသည့်ဟန်ဖြင့် မျက်မှောက်ကြုပ်ကြည့်လေသည်။
မျက်နာကိုလည်းခနသာကြည့်ပြီး မေသူဟွား ၏ ရွှေရင်အစုံကိုသာ ငေးကြည့်နေသဖြင့်၊ မေသူဟွားမှာ ၊ “ ဟို ကျမ မိသက် ရဲ့ သူငယ်ချင်းပါ သူဆေးကျန်နေခဲ့လို့ ကျမဆေးခန်းမှာလေ၊ မနက်ဖြန်ခရီးသွားရင် ယူသွားမလို့ ဆိုတာ ၊ အဲဒါလာပေးတာပါ” “ အော် မိသက်ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်မလေး ဆိုတာလား၊ အေးအေး သူတို့ အပြင်သွားကြတယ်ကွယ့် ထားခဲ့လေ ဦးဆီမှာ ၊ အထဲ မဝင်တော့ဘူးလားကွယ့်” “ ဟင့်အင်း မဝင်တော့…. “ဖြန်း” “ အား “ မေသူဟွား စကားမဆုံးခင် သူ့တင်ပါး အိအိလေးကို ဖြန်းကနဲ အနောက်မှ အရိုက်ခံလိုက်ရ၍ စပ်လည်းစပ်ဒေါသလည်း ဖြစ်သွားကာ နောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး၊ “ ရှင်.. ရှင်.. ဒါက ဘာလုပ်တာလည်း၊ လူကြီးဖြစ်ပြီးတော့” ဖင်လေးကို သူ့လက်ဖဝါးဖြင့်ပွတ်ကာ ရန်တွေ့လာသော မေသူဟွားကို ကြည့်ရင်း နောက်က လူကြီးက၊ “ ဟို နာသွားလား ဆောရီးဆောရီး ငါ့တူမ ဖင်မှာ ခြင်တကောင်တွယ်နေတာတွေ့လို့၊ မနေနိုင်တာနဲ့ ရိုက်ပေးလိုက်တာပါ၊ အခုတလော သွေးလွန်တုတ်ကွေးတွေကလည်း ဖြစ်နေတယ်ကွယ့်” “ အိုရှင် ရှင်ဒီလိုလုပ်စရာမလိုပါဘူး” ထိုအခါကျမှ ထိုလူကြီးကို ဦးရဲထောင်က သတိပြုမိသွားလေသည်။
“ ဟေ့ကောင် သာဒင်၊ မင်း အခုမှ ဘယ်က ပေါ်လာလဲ မင်းတူ မင်္ဂလာဆောင်တောင် မလာပဲနဲ့” “ အေး ငါခရီးလွန်နေလို့ပါကွာ” “ အော် တူမကြီးရေ အဲဒါ ဦးရဲ့ အမွှာ ညီအကိုလေ ကိုသာဒင်တဲ့ မှတ်ထားနော်” “ မမှတ်ထားပါဘူး ဗျာ ခင်ဗျား တို့ လူကြီးတွေ ဖြစ်ပြီး နှာဘူးကျလွန်းတယ် ဒါပဲ သွားပြီ” ပြောပြော ဆိုဆိုဖြင့် နူတ်ခမ်းလေးစူ ခြေဆောင့်ကာ လှည့်ထွက်သွားသော မေသူဟွားလေးကို ကြည့်ရင်းက ဦးဖိုးထောင်နှင့် ဦးသာဒင်တို့ တယောက်ကို တယောက် ကြည့်ပြီး ပြုံးမိလိုက်ကြလေတောသည်။ အကယ်၍ မေသူဟွားသာ နောက်ပြန်တချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါက ထိုလူကြီးနှစ်ဦး တယောက်နှင့်တယောက် လက်ဖဝါးချင်းရိုက် ဟိုင်းဖိုင်လုပ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရမည်ဖြစ်လေသည်။